အစိုးရရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုများအတွက်အ ထဲက ကမၾအောင်မြင်ဆက်သွယ်မှုအေတာ်နှင့်အထဲသို့ဝင်အင်အားအတွက်သင်တန်း။။။။ေ ဖတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဥပဒေကြမ်း၊ဒါကြောင့်သင်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အောက်ပါ:သင်စတင်သောအယူရှိကြသည့်နေ့။ ဘာအမျိုးအစားကုမ္ပဏီအသင်သွားသင့်ပြီးနောက်။ သင်ဘာလုပ်ပါလျှင်သင်ပြီးသားအနေနဲ့ ။ အားလုံးငါးကြယ်တို့သည်။ ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့လက်တော်၌အအပေါင်းတို့သည်လမ်းရှိမရှိခဲ့တဲ့ပြဿနာဝစ္ရန်နိုင်ခဲ့ဘူးပြီ။ ကျနော်တို့ရှိမှကျေးဇူးတင်စကား၊ဝစ္၊ဆင်ပြေနှစ်ခုလုံးနှင့်အတူကောက်ချက်ကိုစာချုပ်များရောင်းချခြင်းနှင့်အလုပ်ရပ်။ တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးသင်ဝစ္သူ့အဘို့ကောင်းသောလမ်းညွှန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု။ လည်ပတ်မှုကုမ္ပဏီနှင့်အကိုင်ကုမ္ပဏီ။ ဒါဟာအလျင်အမြန်သွားပြီး၊ပြဿနာတွေမပါဘဲ။ သူတို့ကောင်းရှင်းပြဖို့အရာအားလုံးနှင့်ကြားလမ်းတလျှောက်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်၊သူတို့ပြုဒါကြောင့်လည်းအများကြီးပိုကောင်းစျေးနှုန်းထက်ကျွန်မမျှော်လင့်ထားအတွက်ဥပဒေတစ်ခုကုမ္ပဏီ။
ရည်ရွယ်ချက်များကိုအများဆုံးအသုံးဝင်နှင့်ပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အပေါ်အခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်နှင့်အကူအညီအတွက်ဒိန္းပုဂ္ဂလိကစားသုံးသူ။ အများဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုအကြိမ်သူတို့ဘဝအတွက်လိုအပ်ဥပဒေရေးရာအကူအညီမှရှေ့နေတစ်ဦးသို့မဟုတ်ရှေ့နေ။ နိုင်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးကွာရှင်း၊အထက်ပါအနှောင်၊အများ၏ဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းအိမ်ခြံမြေငှားရမ်း၏လူနေ၊၊အလုပ္သမားဥပေဒဆက်ဆံရေးကို၊စသည်တို့ကို။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်အလျင်အမြန်လာပြီးစျေးကြီးတစ်ဦး၏အကြံပေးချက်ကိုရှာရှေ့နေ၊ထိုကွောငျ့၊ကကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်နိုင်ပါသည်သုံးစွဲဖို့အချို့ အခမဲ့(သို့မဟုတ်စျေးပေါ)ရွေးချယ်စရာများတည်ရှိကြောင်း။ လျှင်သင်၏အမှုသည်တမလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာနဲ့မကြောက်ဖြုန်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျမ်းနှင့် ၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အများအပြားအဖြေများကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့အတွက်စာကြည့်တိုက် ။ ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဖြေများကိုနေ့စဉ်ဥပဒေရေးရာမေးခွန်းများ။ ထို့အပြင်၊သင်သည်လည်းကြည့်အပြည့်အဝရေးသားထုတ်ဝေဒိကျမ်းအတွက်မီလီမီတာ။ အပေါ် အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူယနေ့အထိတက်ဒိန်းပြည်နယ်ဥပဒေအချက်အလက်။ အပေါ်ရှေ့နေခရစ်ယာန် သိကောင်းစရာများသင်ရှာတွေ့နိုင်သည်အခမဲ့အကြံဉာဏ်နှင့်လမ်းညွှန်မှုအပေါ်ဥပဒေရေးရာပြဿနာများ။ ထို့အပြင်၊အဲဒီအခွင့်အလမ်းကိုပေးပို့ဖို့၎င်း øå ကိုရှေ့နေ။ အများစုအတွက်အဓိကဒိမြို့ရှိအများအားဖြင့်၊ဘယ်မှာနာရီလာနိုငျနှင့်အဖြေကိုရဖို့ဥပဒေရေးရာမေးခွန်းများ၊အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ဒီမှာအပြင်၌၊အ æ သာ နှင့်အရေးကြီးသောဥပဒေရေးရာအကူအညီ(ယခု ဥပဒေရေးရာအကူအညီ)ဂင်။ မကြာခဏ၊အများအပြားသို့လည်းအစဉ်အမြဲ တယောငွေပမာဏ၏ဥပဒေရေးရာအကူအညီမှတဆင့်အိမ်သူအိမ်သို့မဟုတ် ၊ပးရန္။ ထိုကွောငျ့၊ကကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်နိုင်ပါသည်ဆန်းစစ်ဖို့ဘာဥပဒေရေးရာအကူအညီ၊အကယ်။ အတွက်ထည့်သွင်းသင့်အာမခံ။ ဒီဗီဒီယိုကရှင်းပြသည်လက်ထောက်ရှေ့နေ ø မှဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏ အကြောင်းကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်ဥပဒေကြောင်းအရအကူအညီ။
မတ်လအတွက် ၂၀၁၉၊ကျနော်တို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်အစားအစာနှင့်သောက်ပါ။ သင်သည်လည်းပါဝင် အမ်ဳိးအ å။ (ဒီမှာဖတ်အကြောင်း)ရှေ့နေသို့မဟုတ်ရှေ့နေ(အဟောင်းတွေလည်းအကြိမ်ခေါ်)ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်၊အဘယ်သူသည်၏အခြေခံပေါ်မှာအထူးချိန်းပေးဥပဒေရေးရာအတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အမှန်သီးသန့်ပြုလုပ်ရန်ဥပဒေကြောင်းအခြားသူများများအတွက်။ အခွန်၊သတ်မှတ်အတွက်အသုံးပြု ၁၆၀၀၊သာ၏အခြေအနေကို၏တန်ဖိုးအဒိ။ ။ ဘာလင်(၁၉၁၅)မှဆင်းသက်လာသောအင်္ဂလိပ် ။ ပြင်သစ်:အဓိပ္ပာယ်အသင်းဌလာျ၊ဘဏ္ဍာတိုက်။ အဆင်းသဏ္ဍာန်၏အခွန်၊အဆိုအရသိရသည်။ ဘာလင်(၁၉၁၅)အနေနဲ့တရားဝင်ကိုင်ပြီးပြည်နယ်ဘဏ္ဍာဝင်ငွေ-ပြုစုပျိုးထောင် ကြာလာထည့်သွင်းရန်'ကိုလိုက်ကျယ်ပြည်နယ်ဥပဒေများကို'သောဘာလင်ဆက္စပ္ေနသည့္မှပုံမှန်အတိုင်း ၏ပုံစံအတွက်ဒဏ်ငွေ။ အထူးသဖြင့်ဆက်စပ် အလုပ်အ ø။ အထိ ၂၀။ ရာစုနှစ်လူသိများ၏အဓိပ္ပာယ်မှာပိုပြီးစပ်ခွန်-:'ယေဘုယျအားဖြင့်၊စစ်သည်၊ရဲတပ်ဖွဲ့၊အိုင်၊အောက်၊'နေစဉ်(၁၉၁၅)လည်းဖော်ပြထားသောတိုင်းပြည်နှင့်ပြည်နယ်-။ အဲဒီရုံးခန္းဟာ အားဖြင့်ဆွီဒင်ဘားအသင်း၊အောက်ဖံြ၊ဒါပေမယ့်သာအချိန်တိုအတွက်အသုံးပြု။ ယနေ့အသုံးပြုသောစကားလုံးအဖြစ်အင်္ဂလိပ်၊ဖော်ပြဖို့အခြေအနေကိုပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာရေး။ ø ပြင်သစ်:၊သာပိုးဖလံရဲ့အဘိဓါန္မှအကြောင်းနှစ် ၁၇၀၀။ ေရှင်ဘုရင်သို့မဟုတ်ပြည်ကိုအစိုးရမတ္ႀ၊၏။ (၁၉၂၄)သတ်မှတ်အခေါ်အဝေါ်အဖြစ်ခေတ်။ အကြွင်းမဲ့အာဏာနယ်အချိန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ ø အတွက်နှင့်ရေ၊ဒါပေမယ့်ရပ်စဲပြီးနောက်အယူ - ရုံး၊၁၈၄၈-၁၈၇၂။ ထိုမြို့၌အင်္ဂ ၊ကနေလူသိများ ရဲ့အချိန်(၁၆၈၄-၁၇၅၄) ၊အခြားရွေးချယ်စရာအဓိပ္ပါယ်မှာအတည်၊တံ၊အ æå၊ဆိုလိုသည်။ အရှဉ့်နှင့်အတူကြီးမားတဲ့ဦးခေါင်းကို၊ပြောင်းပြန်၊အ æå လည်းဆိုလိုသည်။ မြို့ကြီးများအတွက်ကြာကြာကာလ-အ ၁၇၀၀ နှင့် ၁၈၀၀-အသုံးပြုတဲ့အတွက်အပြိုင်နှင့်အတူရှေ့နေ။ ပြီးနောက် ø၏၁၈၆၈ လျှောက်ထားမှသာအပေါ်ရှေ့နေများအဘယ်သူသည်လက်ခံရရှိခဲ့တော်ဝင်ခေါင်းစဉ်။ ရှေ့နေတစ်ဦးအတွက်အဆင်ပုံစံ၊တစ်ဦးအဟောင်းအမည်ကိုအမျိုးမျိုးသောတော်ဝင်နန်းဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းမှ အလယ်ခေတ်အတွက်တော်ဝင်လက္ဆုိင္ရာ(အစိုးရအရာရှိ)သို့မဟုတ်ခြုံငုံအာဏာပိုင်များအတွက်ကြီးမြတ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုနိုင်ငံ၊အနောက်ပိုင်းခေါ်လျှပ်စစ်မော်တာ။ အ မှာဖြစ်ပွားခဲ့၏ကျုံ့၊အဒစ်အမည်၏။ ဒါဟာအလျင်အမြန်ရရှိခဲ့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်နဲ့အသုံးပြုကြသည်အပေါ်ခွဲဂေါ၊ရာ ရှေးကဥရောပအသီးအသီးအဘို့အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သူတို့အကြာတွင်မှ ။ နှောင်းပိုင်းကိုသတ်မှတ်၏ရှေ့နေ၎င်း၏လက်ရှိအရေးပါ။ အထူးသဖြင့်အတွက်အသုံးပြုဒိန္း၊အခေါ်အဝေါ်ရှေ့နေအပေါ်ဘုရင့်ခန့်ထုတ္မေျမှာတရားရုံးချုပ်။ ခုန်ခြင်းနှင့်စေခဲ့သောသတ္တုသိုက်အတွက် ၊ဒါပေမယ့်မဟုတ်ခဲ့ ။ သာသူတို့အခွင့်လိုကိစ္စများအတွက်အခြားသူများမှာတရားရုံးချုပ်၊သို့သော်၊အတွက်အပြင်၊သူတို့သည်လည်းသွားကြမှာတရားရုံးအားဖြင့်အပြိုင်။ သည်နှင့်အညီပညတ်တရား၏၂၆။ မေ ၁၈၆၈၍မရှိတော့အစိုးရရှေ့နေများအားဖြင့်တရားရုံးချုပ်အားဖြင့်ရှင်ဘုရင်နေစဉ်၊အနာဂတ်ရှေ့နေများ၏အပြည်ရဲ့ထိပ်တန်းတရားရုံးလျက်ရှိသည်ဝန်ကြီး၏တရားမျှတမှုနှင့်ဦးဆောင်မည် øø။၁၉၅၉ခုနှစ်တွင်၊အဆိုပါအခေါ်အဝေါ်လရှေ့နေတစ်ခဲ့သည်၊ဥရောပ၏အကျိုးအတွက်ရှေ့နေ။ သူတို့အားသူ၏ရှေ့နေ၊ø သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊သို့သော်၊ဖြစ်နိုင်အသုံးပွုဖို့ဆက်လက်၊သူတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်။ ပြီးနောက်အကြွင်းမဲ့ေထာင္ထဲစတင်မိတ်ဆက်ထူးတော်ဝင် အားဖြင့်ဆွီဒင်အကူအ နေစဉ်၊ သာကခန့်အပ်။ ခဲ့သည်အားဖြင့်အမိန့်တော်ကို ၃၁။ မတ်လ ၁၇၅၅ လုပ်သမားများအတွက်'အနောက်ဘက် 'နှင့်အတူတာဝန်ကိုလုပ်ဆောင်တရားအားလုံး၏အမႈကိုဘုရင့် အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်အနွယ်အကျိုးစီးပွား။ ဒီရုံးကြီးလို သာသိမ်းပိုက်အားဖြင့်အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလိုနီ။ ေဒိန္း၊ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေဘွဲ့ဖြစ်လာမှရှေ့နေနှင့်အနည်းဆုံးသုံးနှစ်'အလုပ်နှင့်အတူလက်တွေ့ကျတဲ့ဥပဒေကုမ္ပဏီ(များသောအားဖြင့်အဖြစ်လြတ္ေ)နှင့်အချိန်း၏အရင္းတရားကိုပည္စာကိစ္စရပ်များအတွက်တရားရုံး။ အခြေအနေများအတွက်ဖြစ်လာမှရှေ့နေတစ်ဦးကသတ်မှတ်ကြသည်ထွက်အတွက်ကုဒ်များပြည်တွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ သည်တစ်ချက်အဘို့အရယူလိုင္စင္အလေ့အကျင့်၊ပညတ်တရားကို အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်၍အရောင် (ကကမ်းလှမ်းဘားအသင်း)နှင့်နှစ်ဦးစလုံးအောင်မြင်သောအိုဘားစာမေးပွဲနှင့်စမ်းသပ်မှုအတွက် ø။ တစ်ခုခေါင်းစဉ်ကိုကာကွယ်၊နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်သူကိုအခေါ်အဖြစ်ရှေ့နေတစ်ဦး၊အမည်မဖော်ပြဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထိုကဲ့သို့သောသို့မဟုတ်အလားတူသတ်မှတ်စေခြင်းငှါနှင့်အတူရောထွေးခံရတဲ့ရှေ့နေ။ အကုဒ်သတ်မှတ်အဘို့အပြစ်ဒဏ်များကိုချိုးဖောက်ခြင်း။ ပညတ်တရားအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမ။ ၅၂၀၆။ ဇွန်လ ၂၀၀၇ အရေးကိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့(မူစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှုပ်ရှားမှုများတစ်ဦး၏ရှေ့နေ)၊ဒိန်းလႊတ္ေတာ္အတည္ျဆင်ရန်။ အ။ လျှော့ဖို့အ ø။ အဲဖွင့်လှစ်ရန်အခြားတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ထက်အရှေ့နေနိုင်မှာတွေ့ဆုံမှုများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းသောရိုးရှင်းသော (အခန်းလေး-လေးပေါ်ဘို့အမိန့်ငွေပေးချေမှု)၊å နှင့်အထွေထွေလက်အောက် æ။ အပန်းဖြေများအ ø ထဲသို့ဝင်အင်အားအပေါ် ၁။ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၈။ ေနာ္ေဝကဟုခေါ်သည်လည်းသူအမှန်အပည္စာကိစ္စရပ်များအတွက်တရားရုံးချုပ်၊ရှေ့နေ သို့မဟုတ်တရားရုံးချုပ်အကူအညီ။ အတွက်ကျန်တဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေအသုံးပြုရှေ့နေများအားရည်ညွှန်းရန်ထိုအရှေ့နေများ၊အဘယ်သူလုပ်ဆောင်မှာအများပြည်သူနှင့်ပါးစပ် အတွက်ပြည်တွင်းနှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုပေါင်း။ ကော့တလန်အတွက်၊ဘယ်မှာ၊အစပ်၊အဖြစ်အားလုံးအလည္တယ္ဆိုမှာရှေ့နေမပါဘဲကွာခြားချက်စေ၏ထောက်ခံ(ဆန့်ကျင်ပေါ်၊ထိုအမ ø၊သရပျ')၊အထူးအရှင်၊သူသည်အလုံးစုံ၏အ သို့မဟုတ် ø။ သူဟာသူမဖြစ်မှဝန်ကြီးဌာနနှင့်အပြောင်းအလဲနှင့်အတူဤအချက်ကိုအတွက်အမျိုး၏မူလေစကော့တလန်ရဲ့။ ဤစာမျက်နှာကို၊မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံဟုခေါ်သည် ထုတ္မေျ၊ရှေ့နေများ၊ဒါပေမယ့်တွင်သူတို့၏အဖွဲ့ဝင်များ'ဘား'(ဘားအသင်း)။ ေဒိန္းခံရသည့်ရှေ့နေချုပ်၊ဆိုလိုသည်။ ရှေ့နေ(ဖဲကြိုးဖြတ်)လုပ်ဆောင်အားလုံးအမျိုးအစားများ၏တာဝန်များကိုအတွင်းအလုပ်အကိုင်။ အထူးပြုနှင့်ပိုကျယ်ပြန့်အတွက်ဥပဒေအလုပ်အကိုင်၊အထူးသဖြင့်အကြီးဥပဒေကိုကုမ္ပဏီ။ များစွာသော ဥပဒေကိုကုမ္ပဏီသို့ကွဲပြားပြားရာဒေသများ၊ဥပမာအားဖြင့်ကုမ္ပဏီဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း(ဆိုင်း)၊အိမ်ခြံမြေများ၊အလုပ်အကိုင်ဥပဒေ၊အခွန်ဥပဒေ၊စသည်တို့ကို။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့ရှေ့နေများထို့နောက်ရန်တာဝန်ပေး၏တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသည်ဤစည်းကမ်းကိုအောင်မြင်ရန်တစ်ဒီဂရီ၏အထူးပြု။ အတိုင်းအတာနှင့်ရှုပ်ထွေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်များအပြားကုမ္ပဏီများရှာဖွေနေများအတွက်အထူးပြုအထက်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့်အထွေထွေ။ ရှေ့နေများရယူနိုင်သည်ညာဘက်အပေါ်လာဖို့ရှေ့တော်၌ကွဲပြားခြားနားသောတရားရုံးတွင်ဒိန်း။ အ ရှေ့နေမသာခဲ့တဲ့လက်ျာပရိသတ်ကိုမီတရားရုံး၏ပထမဦးဆုံးဥပမာအားဖြင့်၊အရာအတွင်းပထမဦးဆုံးသာဓကအမျိုးမျိုးအပြားဥပဒေကြောင်းအရ။ ထိုအခါ၊သူတို့ရယူနိုင်သည်၊လက်ျာပရိသတ်ကိုမီအနားက်င္းပ။ အမည်၏အရေးပါမှုများရှိသည့်မေတ္တာရပ်မှခရိုင်တရားရုံးမှအမြင့်ဆုံးတရားရုံး။ အဆိုပါရှေ့နေရမယ်၊အရနိုင်ရန်အတွက်ခွင့်ပြုချက်၊အမြည်းအတွက်တရားရုံးများ၏အယူခံ(ø)မှဆန္ဒပြသူ သူမတစ်ဦးကောင်းထြက္ရေ။ အဆိုပါရှေ့နေဖြစ်သင့်၊စည်းကမ်းအဖြစ်ထားရှိရေးနှစ်ဦး၏စမ်းသပ်မှုကိစ္စများအတွက်အမိန့်ရရှိရန်၏ညာဘက်ပရိသတ်ရှေ့မှာမြင့်လေသည်။ ရှေ့နေများ၊ရယူတဲ့သူညာဘက်အပေါ်လာဖို့ခင်မြင့်ဝေနိုင်ရေး(ဌ)ပြီးနောက်သူတို့၏ ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊သင်တစ်ဦးရှေ့နေရယူနိုင်သည်၊လက်ျာပရိသတ်ကိုမီတရားရုံးချုပ်သောနောက်၊သူ သူမကိုရေးနိုင်ပါတယ်(ဇ)ပြီးနောက်မိမိအမည်။ ဝန်ခံဖို့ဘား၏တရားရုံးချုပ်ကြသည်နှင့်အတူဆက်စပ်အချို့ဂုဏ်သိက္ခာ။ (ဇ)သူသည္သူမအတွင်းငါးနှစ်မှာတွေ့ဆုံရန်အနည်းဆုံးဆယ်ကြိမ်တွင်တရားရုံးများ၏အယူခံ။ ရှေ့နေခဲ့သူရရှိခဲ့၏ညာဘက်ပရိသတ်ရှေ့မှာအမြင့်ဆုံးသောတရားရုံး၊အတိတ်အတွက်အခေါ်အ ø နေစဉ်၊သူတစ်ဦးရှေ့နေကြီးမှဝန်ခံဘား၏တရားရုံးချုပ်၊လုပ်ငန်းတာဝန်များ။ ဤခေါင်းစဉ်များမှာလက်ဝဲသောနေ့၌၊အရာအားလုံးရှေ့နေရှိသည်။.
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳရှေ့နေရုံးမှဒီနေရာတွင်အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ရှေ့နေရဲ့အခန်းကဏ္ဍ၏အ ။ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိစ္စနှင့်ဥပဒေရေးရာ။ ကျနော်တို့အလုပ်၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖော်ပြရန်ဆောင်းပါးများ၊အကြောင်းသင်ပေးနိုင်ပိုကောင်းထိုးထွင်းအတွက်ရှင်တို့၏အကျိုးအတွက်ပူးပေါင်းနှင့်အတူရှေ့နေသင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ၌။ အဘယ်သို့ဆိုင်အကျိုးကျေးဇူးများသင်နှင့်အတူအောင်မြင် ၏အတွင်းဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း။ အကြောင်းဖတ် စီးဆင်းနှင့် အခန်းကဏ္ဍအခါစာချုပ်များရောင်းချခြင်းသည်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့၊သင့်ရဲ့အခွင့်အတွက်နေအိမ်သို့ဝင်သည့်အခါ။ အကြောင်းဖတ် နှင့်မြေမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊သင်မည်သို့သေချာစေရန်သင့်မြေး ဆက်နဲ့ကော။ ဘယ်လိုသင်တို့မှတ်ပုံတင်ရန်အအုပ်ချုပ်၏အခြံ။ *သတင်းအချက်အလက်သည်သာဆင်မပုံစံ၏အခြေခံအနေနဲ့အမှန်တကယ်အမှုသို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏သံသယ။ ယူကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်အမှားအယွင်းခြင်းနှင့်ချို့တဲ့ခြင်း၊တောင်းသည်အစဉ်အမြဲပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေအတွင်းသင့်ရဲ့ဧရိယာများအတွက်နောက်ထပ်အကြံဉာဏ်။
ကူညီထောက်ပံ့အလွန်အမင်းအထူးပြုအတွက်ပြည်တွင်းဥပဒေတွေအမျိုးအစားအားလုံးကိုအမှုပေါင်း၊သက်ဆိုင်ရာအရာတစ်ဦးချင်းစီအဘို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံဉာဏ်သည်ရိုးသားစစ်မှန်ပြီးအပေါ်အခြေခံသည်၊သင့်ရဲ့လိုအပ်။ ကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်ပါတယ်အကိုအကောင်းဆုံးရလဒ်သင်တို့အဘို့အချိတ်အရေးပါသည်ငါတို့၏အကြံပေးချက်ဖြေရှင်းချက်ဖန်တီး၊အရာကိုလည်းပေါ်အခြေခံလူ့လိုအပ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအမြဲဖြင့်ဖုံးလွှမ်း။ ကျနော်တို့လက်ခံရရှိအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ဖော်ရွေသောအကြံဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်အဘိတ်၏အမည်။ ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ်တိုင်အဘို့အကောင်းဆုံးဘာအမေရိကန်နှင့်လေကောင်းတစ်ဦးရှင်းပြချက်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အယူအဆ၊သိမ(ခံစားချက်မပါဘဲ)။ အပြင်ကအမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ဖြစ်ပွားမှု၏အကူအညီနဲ့ရှေ့နေတွေ၏။ အဆိုပါရှေ့နေခဲ့ရည်အချင်းနှင့်အနိုင်အဘယ်အရာကိုထုတ်တွက်ဆခဲ့ခံရဖို့၊ကိုငါ့ခက္လွဆွဲအမှုပြန်။ ကူညီရှေ့နေ ငါ့ကိုအကူညီပေးကောင်းအားဖြင့်အတိုင်း၊ကျွန်မလိုအပ်ချက်အတွက်ဥပဒေအထောက်အကူ။ ငါခံစားခဲ့ရကြောင်းသူတို့အဆက်မပြတ်ခဲ့ ၁၁၀ အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရာ။ ကူညီရှေ့နေများ၊ရုံးများအတွက်ဂင်နှင့်အော်။ ကျွန်တော်အကြံပေးနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အနော်ဝေးနှင့်ဒိန်းဥပဒေနဲ့ဦးဆောင်မှုများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်နော်ဝေနိုင်ငံနှင့်ဒိန်းမတ်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်၏အကူအညီအာမခံနှင့်အကြံပေးချက်ကိုကူညီဖို့အာမခံဖောက်သည်ပေး æ သာ ဖြင့်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဖောက်သည်တစ်ဦး၏အကူအညီအာမခံလိုအပ်မှုအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်ဥပဒေကြောင်းအရကိုယ်စားပြုသည်အမှု၊ဆက်သွယ်အကူအညီအာမခံဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်သူပါ။ ကနေတဆင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိချင်စိတ်၊ကြိုးစားကြရန်အကောင်းဆုံးအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးကုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်ပုတ်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများ၏ပညတ်တရားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။
ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်မြို့ ၌ တစ်လျှောက်လုံးပီး
အ တစ်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက်အထူးပြု။ ကျနော်တို့ထဲမှာတည်ရှိ နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေအိမ်ရောင်းအားလုံးအတွက်စစ်။ ၏အဖွဲ့ဝင်ဒိန်း ။
အဓိကအကြားဆက်ဆံရေးနှင့်စားသုံးသူများနှင့် စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထုတ်ပြန်ချမှတ်သောအသုံး ။ ထိုသို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ဓာတ်ငွေ့နှင့် ။ ကိုအတူသတိပေးရလက်လှမ်းအပေါ်အာဏာပိုင်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်(လသ)။ မှတပါး လည်းသက်ဆိုင်သောအထွေထွေပြည်တွင်းဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊အပါအဝင်၏တိကျတဲ့ကုန်သောဥပဒေများသည်ပုဂ္ဂလိကစားသုံးသူ။ ထိုသို့၊ဥပမာအားဖြင့်၊စာချုပ်ဥပဒေ၊စားသုံးသူဥပေဒရာင္းအငွား၊ နှင့်အတူပို။ သို့မဟုတ်အမြင်အမျိုးမျိုးအပြားပြိုင်ပွဲနှင့်စားသုံးသူပိုင်ခွင့်အာဏာဝက်ဘ်ဆိုက်။ စာချုပ်ဥပဒေသည်ဗဟိုမှဆက်ဆံရေးတွင်နိဂုံးချုပ်၏သဘောတူညီချက်များအပေါ်ပေးအပ်ခြင်း၏စွမ်းဆောင်မှုများ။ စာချုပ်များမကြာမီပြည့်စုံသူ အပေါ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတောင်းဆိုချက်များကိုစားသုံးသူများ၏အလျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့။ အခန်းကြီးအပေါ်မျှစာချုပ်စည်းကမ်းချက်များအပေါ်အခြေခံသည့်အတည္ျ။ စီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးရာအ ၃၁။ ဇန္နဝါ ၂၀၁၉ အတည်ပြုပြီးအသစ် ၏အယူခံဘုတ်၏လယ်ပြင်တွင်စွမ်းအင်။ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်နိုင်ငံရဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ရေးအစည်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်နှင့်အညီရည်ရွယ်ချက်များ လုံခြုံရေးများ၊ဘောဂဗေဒ၊ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စားသုံးသူအကာအကွယ်။ အသိပေးခြင်းင်စည်းမျဉ်းအပေါ် တာဝန်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုစားသုံးသူမှစ။ အသိပေးစာပါရှိသည်တိကျသောငွေတောင်းခံမှုလိုအပ်ချက်များကိုများအတွက် နည်းဥပဒေများဖြည့်စွက်၏အသိပေးစာအ သိပေးစားသုံးသူများအကြောင်းစွမ်းအင်စားသုံးမှုနှင့်တောင်း။ အ ပါရှိသည်စွမ်းဆောင်ရည်စံ æ လျှပ်စစ်မီတာ။ ဖြည့်စွက်ကာ၊များအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏တိုင်းတာလျှပ်စစ်မီးများအတွက်အဆုံးအသုံးပြုသူများ(စားသုံးသူ)။ ပညတ်တရားကိုထားသည်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အောင်မြင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်စားသုံးသူအကာအကွယ်။ အဆိုပါဥပေဒဆက်စပ်အထူးသဖြင့်အစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်စားသုံးသူကာကွယ်စောင့်ရှောက်အတွက်အကွာအဝေးစာချုပ်နှင့်စာချုပ်များကောက်ချက်ချကွာကနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသိပေးစာ(နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ æø)သတင်းအချက်အပေါ်အယူခံအခကြေးငွေနှုန်းနှင့်ငွေကြေးသင့်၊အသီးသီးအဖြစ်၊စားသုံးသူနှင့်အကုန်ယူလွ်င္အ æ။ အခမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်သည်ဖော်ပြသောပြည်နယ်အမည်ပေးဘဏ္ဍာရေးအကူအညီနှင့်အတူ သေချာစေရန်အလို့ငှာျပည္သူေတရားမျှတမှုများကိုရရှိရန်။ ရည်ရွယ်ချက်အခမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အောင်လူနှင့်အတူလျော့နည်းအဆင်သင့်သောစီးပွားရေးအခြေအနေလည်းရှိသည်ဖို့အခွင့်အခဲကိုတရားစွဲဆို။ ရည်ရွယ်ချက်များအက်ဥပဒေသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်ပုဂ္ဂလိကစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ၊ဆိုလိုသည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူ၏တောင်းဆိုမှုများအပေါ်၏ကိုယ်စားအခြားသူ၊ဖြစ်ပျက်ဘဲ ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပုဂ္ဂလိကစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ၊အကောက်အတွက်မျှနှင့်သံ။ ရောင်းချတဲ့ကုန်ပစ္စည်း၏ဆောင်ရွက်ကွပ် ø၊အသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အိမ္သုံးတီမဟုတ်သောစားသုံးသူ။ အထွေထွေအိမ်ခြံမြေဥပဒေအခြေခံမူများအဖြစ်၊ရောင်းချတဲ့ကုန်ပစ္စည်း၏လုပ်ရပ်များဖြင့်ဖော်ပြကြသည်လည်းများ၏အရေးပါမှုကိုမှဆက်ဆံရေးတွင်ဝယ်ယူနှင့်ပို့ဆောင်မှုစွမ်းအင်။ အဆိုပါဥပဒေအပေါ်ငွေပေးချေမှုကွပ်ဆင်ရန်။ အ။ သိုက်နှင့်ဆုတ်ခွာတစ်ခုအပေါ်အကောင့်အ၊၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ငွေထုတ်ကဒ်များ၊အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်၊တိုက်ရိုက်ငွေထုတ်သဘောတူညီနှင့်လွှဲပြောင်း၏ရန်ပုံငွေ။ အဆိုပါဥပေဒအရေအတွက်င်စည်းမျဉ်းများ၊ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်အသုံးပြုသူများငွေပေးချေ၏။ မီဒီယာဥပဒေမူကြမ်းအပေါ် ။ ရည်ရွယ်ချက်သေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်ကြောင်းဓာတ်ငွေ့ထောက်ပံ့ရေးအစည်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လုံခြုံရေးများ၊ဘောဂဗေဒ၊ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စားသုံးသူအကာအကွယ်။ အချက်အလက်လိုအပ်ချက်များကို၏တည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေး။ အသိပေးခြင်းဆောင်အစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်စားသုံးသူအကာအကွယ်၊အထူးသဖြင့်ေနာက်တစ်ဦး၏အမွားမ်ားတင္မဲအပေါ်ထောက်ပံ့မှုသဘာဝဓာတ်ငွေ့။ စားသုံးသူအချက်အလက်။ အသိပေးခြင်းကိုဆောင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပေါ်ငွေတောင်းခံနှင့်သတ်မှတ်၏ကုန်ကျစရိတ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်း၊အရာအထူးသဖြင့်အဆိုပါ၏ရလဒ်အမွားမ်ားတင္မဲအပေါ်ထောက်ပံ့မှုသဘာဝဓာတ်ငွေ့။ ကွပ်ပြဋ္ဌာန်းပေးရန်တာဝန်များအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒဏ်ရာနှင့် အဖြစ်၊ထုတ်ကုန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဓိဋ္ဌာန်၊ဆိုလိုသည်။ ထိုသားကောင်မှသက်သေပြထိခိုက်ပျက်စီးမှု၊အပြစ်နှင့်အကျိုးဆက်စပ်ကြားဆက်ဆံရေးအပြစ်နှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။ ကွပ်ပုဂ္ဂလိကတောင်းဆိုမှုများအပေါ်ငွေပေးချေမှု၏အကျိုးစီးပွားများအတွက်နှောင်းပိုင်းတွင်ငွေပေးချေမှုအဖြစ်သတိပေး-နှင့်သက်ဆိုင်သော၊စုဆောင်းမှုအခကြေးငွေ။ ထိုကုဒ်များပြည်တွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပေးများအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပေါ်ဥပဒေကြောင်းအရအကူအညီနဲ့ရှိပါတယ်သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက်'အသိပေးခြင်းအပေါ်လူထုဥပဒေရေးရာအကူအညီဖြင့်ရှေ့နေများ'။ ထိုကုဒ်များပြည်တွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း- တကယ်တော့ဥပဒေအပေါ်တရားရုံးရဲ့စောင့်ရှောက်မှု၊အစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်တရားရုံးများ၊ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊အခြေအနေများအတွက်ဖြစ်လာဖို့အလုပ်လုပ်အဖြစ်ရှေ့နေအဖြစ်အစည်းမျဥ်း၏ကုသမှုများအရပ်ဘက်နှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ၊အဘို့အနာလန်ထူ၏အကြွေးတွေ၊စသည်တို့ကို။ အ ရဲ့တရားရုံး။ ပေါ်မှာအပူပေးဝေကွပ်မူဝါဒအတွက်ဒိန်းမတ်အဖြစ်တစ်အရေအခြေအနေတွင်မှဆက်ဆံရေးတွင်ထောက်ပံ့ရေးပူရေအတွက်လူနေရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊သူတို့ဖြစ်နိုင်။
ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်အပြာရောင်ရေ၊အထွေထွေအခြေအနေ၊တစ်ရွေးချယ်ရေးများတည်ဆဲဥပဒေများ၏လယ်ပြင်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် အတွက်အခြေခံအနီဖောင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများရထားများ၏ကုန်ပစ္စည်းများမှာပင်လယ်သည် ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင်နှင့်အတူအမွေး၏အမွားမ်ား။ ဤအကြာတွင်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး ၁၉၆၈ အားဖြင့်ဟိဂ်- စည်းကမ်းရာနေ့အဖြစ်မှတ်ယူအသုံးအများဆုံးအခြေခံဥပဒေသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရေးကြီးဆုံးကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရေကြောင်း။ နောက်ပိုင်းခေတ်နှင့်တိုးမြှင့်အ 'ပေးရန်တာဝန်ခဲ့ကြိုးစားခဲ့နှင့်အတူ ကုလသမဂၢ-အမွေးမွ ၁၉၇၈ အဟမ်းဘတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊သို့သော်ဤသာအမွေးအနည်းငယ်။ နောက်ဆုံးပေါ်ကြိုးပမ်းမှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ခဲ့ပြီးနှင့်အတူအရည္ေစည်းဝေးကနေ ၂၀၀၈ အရာ၊အခုတော့ပွင့်လင်းအတွက်နောက်ထပ်တိုးချဲ့ နှင့်မအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေများ၏သဘောတူညီချက်များအပေါ် ဆာင္ေဖြေရှင်းချက်၊အရာအတွက်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်။ အများဆုံးနိုင်ငံများရှိအဆိုပါဒြပ်စင်များအတွက်ပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းအတိုင်း၊ဤမတူညီသောတရားသို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အလောင်းတွေ၏၊ဒါကြောင့်မည်သည့်ကွာဟ၎ခွာ၏ပွိုင့်တွင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအမွားမ်ားမပသည္၏အမျိုးမျိုးသောဥပဒေကြောင်းအရ။ ညီဖံြစည်းမျဉ်းတွင်အခြေစိုက်ပရ- မဂ္ဂ၏၁၉၆၈ ခဲ့သောကုလသမဂ္ဂကမွ ၂၀။ ၁၉၇၅ နိုဝင်ဘာလ။ ဒိန္းမလသမဂ္ဂအစည်းဝေး-ဟမ်းဘတ်ကြန္ဗင္း ၁၉၇၈-ဒါပေမယ့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာထည့်သွင်းအတွက်လက်ရှိ ø သောအတိုင်းအတာဒီဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဖြစ်ပါသည်မှုကြောင့်အမွားမ်ား-။ အထွေထွေညီလာခံအတည္ျ ၁၁။ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၈၊အသစ်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာဖြစ်မည်ဟု အတည်ပြုရေးအပါဆုံးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ရေကြောင်း၊နှင့်ဒါ့အပြင်အတွက်အချိန်လိမ့်မည် ပူးေ ø ရဲ့အခန်းကြီးဆယ်ပေါ်၊ဒါခေါ် ။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခြားနားချက်များအနေဖြင့်ယခင်နိုင်ငံတကာ ø တစ်ဦးတိုးတက်လာသောဥပဒေကြောင်းအရအဆင့်အတန်း နှင့်တစ်ခုတိုးမြှင့်တာဝန်ဝတ္တရား၏ကန့်သတ်၊နှင့်ထိုအထားအစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအဘို့အတက်တစ်ခုတိုးချဲ့ æ၊အဖြစ်ဖြင့်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်တိုးချဲ့နိုင်မှအ စာချုပ်၊ပါဝင်သောနှစ်ဦးစလုံးအတွက်-နှင့် နှင့်အတူအခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏နည်းလမ်း။ အဆိုပါဟမ်းဘတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမွေးစားခဲ့သည်။၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင်များ၏အများစုကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၊အဘယ်သူတူခိုင်မာ၏တာဝန်နှင့်အစည္းအ ø။ နေရာလေ၊အထူးသဖြင့်အဖြစ်ထိုကုမ္ပဏီမှတာဝန်မှ အ ၊ဃ။ ငယ္။။ အချိုးအဟောင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း၊နှစ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း-နိယာမ(အခြမ်းမှသင်္ဘောသားကသင်္ဘော)။ ဒါဟာပျက်ကွက်အောင်မြင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောထောက်ခံမှုကနေအဓိကကုန်သွယ်ဂၢ၊ဒိန္းခဲ့ အဆိုပါဟမ်းဘတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသာအသုံးပြုများအတွက်အဖွဲအမှားအတွက်အမျိုးသား ø။ ပ- စည်းမျဉ်းမှာ ၁၉၆၈ ကြိုးစားတိုးတက်စေရန်အ အနေအထားနှင့်ပတ်သက်။၊နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနောက်ဆုံးမှာခဲ့လွန်ကြီးစွာသောထောက်ခံမှုအတွက်အဆင်။ အ။ ဥရောပ။ အတူကံချွင်းချက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ ။ ။ အမွားမ်ား- နေ့ဖြစ်နိုင်အများဆုံးကျယ်ပြန့်တဲ့နေရာမှာအသုံး ø ခြေခံအကြားအဓိကကုန်သွယ်ရေးနှင့် ။ နှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်းကောအ (အထူးဆွဲ)၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်၊နှင့်ဤအတုငွေကြေးယနေ့၏အခြေခံအကဲဖြတ်၏အပျက်ကိုသာအပေါ်ပင်လယ်ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဒါပေမယ့်လည်းအခြား၏။ ထိ ၁၉၂၄၊အဆိုပါရေကြောင်းကုမ္ပဏီများ၊သူတို့ကိုယ်သူတို့အထဲကအားလုံး၏တာဝန်အပေါ်ဥပဒေကြမ်းများ၏အမျက်နှာနှင့် ၊ထိုအခါပစည်းမျဉ်းတစ်ခုတီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ပြီးနောက်အားလုံးအတွက်ကန့်သတ်အတိုင်းအတာ-၏မျက်နှာသာအတွက်၊ပိုင်ရှင်တွေခဲ့သူကုန်စည်စီးသင်္ဘောများ။
ကျနော်တို့ပေးလုပ်ငန်းကိုပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ၊နေရာအတွက်အနီးကပ်အပြန်အလှန်နှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဝန်ထမ်းရန်အထောက်အကူပြောင်းလဲအကောင်အထည်ဖော်မှု၏လယ်ပြင်တွင်စျေးကွက်ဗျူဟာ၊ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ထုတ္လုပ္မႈ၊၊-စီမံခန့်ခွဲမှု၊စီမံကိန္း-စီမံခန့်ခွဲမှု၊အဖွဲ့အစည်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု။ အပြောင်းအလဲအတွက်အလုပ်လုပ်ကိုင်အသက်တာသစ်ဖြစ်စေတောင်းဆိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်း'အခန်းကဏ္ဍအတွက်ခေတ်သစ်အလုပ္သ။ ကျွန်တော်အကြံပေးနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်း ။ အဘိတ်၏ လျှင်၊ရည်ရွယ်ချက်အကိုဆွဲဆောင်နှင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား။ အများပြည်သူကဏ္ဍအသွင်အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူအဆက်မပြတ်စည်းပြောင်းလဲမှုကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနေ့စဉ်အသက်တာ၏။ ကော်မရှင်ဖွဲ့အလွတ်တန်း'ဒိန္းကူညီပြည်သူ့ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကမ်းလှမ်း အတိုင်ပင်၏လယ်ပြင်တွင်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊အဖှဲ့အစ၊ခေါင်းဆောင်မှု၊မဟာဗျူဟာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါ။ အသစ်ရယူပါလှုံ့ဆော်နှင့်ထချို့လျှော့ချရန်၏ပိတ်ဆို့မှုများ၊လွန်ချိန်-စားသုံးနှင့်ကိစ္စကိုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်။ သင်လိုအပ်ချက်၌ရှိကြ၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု။ ကြိုးစားစမ်းသပ်သည်သင့်အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီနိုင်စွမ်းထိန်းသိမ်းထားပြီးဆွဲဆောင်အကောင်းဆုံးမန်နေဂျာနှင့်ဝန်ထမ်း။ ကြိုးစားစမ်းသပ်အသိပညာထွားလာသည့်အခါအသိပညာအမျှဝေသည်။ အသိပညာအမျှဝေသည်မှတဆင့်အချက်အလက်၊ဆက်သွယ်ရေး၊သိရည်ရွယ်ချက်များ၊ယုံကြည်မှု၊ပွင့်လင်း၊သိချင်စိတ်၊ဝမ်းမြောက်သောစိတ်၊နှင့်အသိအမှတ်ပြု။ ကြိုးစားစမ်းသပ်နေတယ်ဆိုရင်သင်အတွက်အဘယ်မှာရှိအနေအထားမျိုးစုံရှိပုဂ္ဂိုလ်ထံမှတူညီသောဌာနသို့မဟုတ်အသီးသီးမွဌာနအတွက်သင့်အဖွဲ့အစည်း၊ဘယ်သူလိုဖြစ်ဖို့အပေါ်တူညီသောသင်တန်းများ၊နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့မဟုတ်လ့က်လွတ်တန်း'ဒိန်းမတ်အကောင်အထည်ဖေါ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ၊သာ။ ကျနော်တို့အပြုအစီအစဉ်များ၊သင်တန်းများနှင့်ဒီဂရီ။ ဆိုလိုသည်။ သောအရည်အချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကောင်အထည်ဖော်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်း၏မြောက်ဘက်တွင်ဇီလန်။ သင်တန်းသားများ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွင့်လင်းအစီအစဉ်များ၊သင်တန်းများနှင့်ဂ၊ လာတဲ့အဖွဲ့အစည်း၊အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ အလွတ်တန်း'ဒိန္းရဲ့အလွတ်တန်း'ဒိန္းမတ္အမွီ ၏ဂရင်း ။ အဆိုပါသင်တန်းပါဝင်သည်၊တစ်ဦးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တွင်းမှပြင်ပဆက်ဆံရေး၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-စီမံခန့်ခွဲမှု၊၊ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်း၊ဆက်သွယ်ရေးပီးအဖြစ်အပြင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်မြင်ကွင်းအတွင်း။ အလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ငါးလုပ္ငန္း၊စိုက္ပ်ဳိးေ၊ လွတ်တန်း' တစ်ဦးရှိပါတယ်တာဝန်မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ပစ်မှတ်ထား ၏အဓိကပုဂ္ဂိုလ်မှာမွာက္မွာ တစ်ဦးအလွတ်တန်း'ဒိန္း့အကူအညီအ ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်နှင့်အကြားအတွေ့အကြုံမန်နေဂျာနှင့်ဝန်ထမ်းများ၊အုပ်ချုပ်ရေး၊အဓိကတာဝန်မှာ လမ်းများတစ်ဦးအလွတ်တန်း'ဒိန္းမတ္အမွီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့၊အကောင်အထည်ဖော်ပြီးရင်ကုမ္ပဏီရဲ့ဗျူဟာ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းကိုပေးစမ်းသပ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်သားကြမ်းပြင်တွင်အမျိုးမျိုး၏အတွင်းပိုင်းရမှုတ်သွင်းခြင်းအားဖြင့်အတွင်းပိုင်းကနေကမ္ဘာအနှံ့။ နည်းပညာကလူတွေနောက်ကွယ်မှ။ နှင့်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ရစေကိုရွေးဖို့၊လေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အသစ်မာကြမ်းပြင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ ၁၈၅၇ တွင် တောင်ပိုင်းနှင့်အတူယနေ့တွင်ကမ္ဘာတစ်ခုခေါင်းဆောင်လှပရေးနှင့်ရေရှည်ပျဉ်ပြားနှင့်ပါေကးခင်း။ ခင်းတွင်ရောင်းချရန်ထက်ခုနစ်ဆယ်နိုင်ငံ။ ခင်းထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူစစ်မှန်သောစိတ်အားထက်သန်များအတွက်သစ်သားဒီဇိုင်းနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အလှအပအတွက်။
ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာနိုငျနှစ်ဦးစလုံးနိုင်အောင်အပြောင်းအလဲအတွက်တန်ဖိုး။ အန္တရာယ်ကိုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအရရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ။ ခင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေ၊သင်ဖတ်သင့်အ ၊မှာရရှိနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါသည် နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချက်အလက်တွေ့လိမ့်မည်ဟူသော၊သင်သာ သကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ရန်ပုံငွေ၏ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ။ အခါသင်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ဒိန္း၊ဒါကြောင့်သင်ရရှိပထမဦးဆုံး အနားယူလုံးဝမရှိဘဲမည်သည့်ကုန်သွယ်စရိတ်၊စီမံခန့်ခွဲမှုအခကြေးငွေနှင့်အခြားအနှစ်ပတ်လည်ရာခိုင်နှုန်းနှုန်း(ဧ ၀)။ ထို့ကြောင့်ရန်ပုံငွေပေးသော၊အရာအားလုံးကိုနှင့်ဘာမှမ။ ရန်ပုံငွေကအောက်ပါအတိုင်း ၂၅ ဂီညွှန်းကိန်းတွင်အဂင်စတော့အိတ်ချိန်းအတွက်အတက်အကျ။ နှင့်မအစဉ်အလာ ၂၅-အညွှန်းကိန်း၊သို့သော်၊အဲဒီမှာအဘယ်သူမျှမမျှဝေသောပြဌာန်းထက်ပိုနှစ်ဆယ်။ တစ်နေရာရာတပ်ဖွဲ့ကိုကျနော်တို့ဘေးကင်းလုံခြုံသင်ပေးဆောင်ဖို့၊သင်ထင်။ အဘယ်သူမျှမ၊ မဟုတ်မှာအားလုံး။ ကျနော်တို့ပျော်ရွှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကနှင့်အတူပျော်ရွှင်သင့်ရဲ့အငြိမ်းစားချွေတာ။ ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏၊ငါတို့သည်မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းတွေ့ရှလိမ့်မည်အခြားရန်ပုံငွေများ၊အခွင့်အလမ်းများ၏စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်နှင့်အခြားအရာကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအတွက် ။ အခါသင်အဖြစ်တည်ထောင်ဖောက်သည်နှင့်အတူ ၊သင်မိနစ်အနည်းငယ်အတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်လည်းလှုပ်ရှား၏လက်ရှိပင်စင် ဒိန္း æ နှင့်အညီ ရဲ့အန္တရာယ်ဖစ္ေသာအမျိုးအစားအဝါရောင်။ ဒါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်များအရပ်၌အန္တရာယ်အကြောင်းအသိုက်နိုင်တယ်လုံးဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။ အဆိုပါထုတ်ကုန်အမျိုးအစားမခက်ခဲသည်ထွက်တွက်ဆရန်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်နှင့်အတူဆက်စပ်အန္တရာယ်။ အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမြို့တော်စေခြင်းငှါအဖြစ်ကောင်းစွာမြင့်တက်အဖြစ်ကျဆုံးသိသိသာသာတန်ဖိုး၊နှင့်အာမခံချက်မရှိပါ၊သင်ပြန်ရလိမ့်မယ်ပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ သမိုင်းပြန်မအာမခံအနာဂတ်ပြန်လည်ရောက်ရှိ။ သင်အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ရန်ပုံငွေနှင့်အန္တရာယ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချက်အလက်ကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်၍ထိုအသင်းနှင့် ၊အရာသင် တွေ့အထက္။ သင်ဖတ်သင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအချက်အလက်များ၊သင်ဆုံးဖြတ်ခင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်ရန်ပုံငွေ။ သာရမှာကုန်သွယ်မည်မှတဆင့် ။ အခါသင်ဝင်ရောက်ထားမှသင့်လိမ့်မယ်၊ရိုးရှင်းစွာအကိုနှိပ်ပါမှာအထက်ပါညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာ။ သင်သည်လည်းသုံးနိုင်သည်အတွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ရှာတွေ့။ သင်ပြီးသားမဖောက်သည်တစ်ဦး၏၊သင်ရနိုင်အပေါ်ရရန်နှင့်အတူမိနစ်နှင့်အတူ ။ အဘယ်သူမျှမ၊ တွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဒိတော့စျေးကွက်၊ဒါပေမယ့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့်ကျော်ကြားသောဆွီဒင် Ö ၊ကလအတွက်မှတ်ပုံတင်။ ထိုဆန့်ကျင်ရန်၊အဒိအလှန်ရန်ပုံငွေမကုန်သွယ်အပေါ်စတော့အိတ်ချိန်း၊ဖြစ်နိုင်စေသည်ပူဇော်ဖို့တစ်ရန်ပုံငွေလုံးဝမရှိဘဲနှစ်စဉ်ရာခိုင်နှုန်းနှုန်း(ဧ ၀)။ များအတွက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးဒိန်းလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေ၊အဲဒီလိုသွယ်ဝိုက်ဖြစ်နှင့်ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတူသဘောတူ၊အဆိုပါဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းစျေးနှုန်းအပေါ်။ ကုန်သွယ်၊နှိုင်းယှဉ်အတွက်ပင်ကိုယ်တန်ဖိုးကိုဆိုလိုသည်။ တူညီသောတန်ဖိုးများအတွက်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းများ၏ရန်ပုံငွေ။ အ အားဖြင့် ၂၆။ ဇွန်လ၂၀၁၄လိမ့်မည်များ၏ရာပေါင်းများစွာအမေရိကန်ဒေါ်လာ။ ဒါပေမယ့်ခါ မကုန်သွယ်အပေါ်စတော့အိတ်ချိန်း၊မင်းကင်းမှဝယ်အလုံးစုံယူနစ်။ အခြားစကားများတွင်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့(။ သူ။ ၂၅၀$အတွက်ရန်ပုံငွေနှင့်ဤအရပ်မှသင်တို့ကိုရ ၂၊ငါးရှယ်ယာများ။ သင်မြင်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု၏ရန်ပုံငွေမှာ ။ အဲဒီလိုဖြစ်လာနိုင်မှကုန်သွယ်ရေးရန်ပုံငွေ၊သင်သည်ဖောက်သည်တစ်ဦး၏ နှင့်ရှိသည်လိမ့်မည်။ အခမဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ပူးပေါင်းနှင့်ဖောက်သည်တစ်ဦး၊နှင့်ကျနော်တို့မှာအဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုများအတွက်။ နိုင်သည်၊သို့သော်၊သာကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်ဖောက်သည်၏၊ဆိုလိုသည်။ ထိုမှတဆင့်ဌာနခွဲမပါဘဲထိုကဲ့သို့သော၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ၊ရာ အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဉာဏ်သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမှု။ သင်ကုန်သွယ်ရေးရန်ပုံငွေမှသင့်လိမ့်မယ်၊သင်ပြီးဆက်သွယ်မှာခုနစ်ဆယ်နှစ်ဆယ် ၆၆၈၅၊ထို့နောက်အကြှနျုပျတို့သညျကိုကူညီနိုင်။ လွယ်ကူစေသည်ဘယ်လိုကြည့်ဖို့အများကြီးကိုကယ်တင်ကြံသောအားဖြင့်အားလုံးကုန်ကျစရိတ်ကွာနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ဒိန္း။ တွက်ချက်မည်သို့အများကြီးပိုအ å နှင့်သို့မဟုတ်ပြီးသားငွေစု ပေါက်ရှိပါတယ်လျှင်၊အဘယ်သူမျှမကုန်ကျစရိတ်များ၊ဘာသာရပ်အနေနဲ့မျှော်မှန်း၊မျှော်လင့်စရိတ်နှင့်မျှော်မှန်းရေအတွက်၏နှစ်တယ္။ အဆိုပါတွက်ချက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးလစဉ်ပြန်စရိတ်များအတွက် å၊နှစ်စဉ်ပြန်လာနှင့်ကုန်ကျစရိတ်၏။ အဆိုပါတွက်ချက်မှုအတန်ငယ်ရိုးရှင်းသောအဖြစ်၊ကုန်ကျစရိတ်အမှရန်ပုံငွေများ၊နုတ်နေ့စဉ်နေစဉ်၊အ ဖြစ်သောလစဉ်။ အစားကိုဖော်ပြနေ၏နေ့စဉ်လိုအပ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်၊အကြှနျုပျတို့သညျရှိသည်ဖို့ရွေးချထိုလနှင့်လအတွင်းအဘို့အလိုငှါရိုးရှင်း။ လ္။ တွင်ထည့်သွင်းမထားဘူး။ တွက်ချက်ရန်အပေါ်အခြေခံ å အစပြုပေါ်တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့သုံးဆယ်ကိုအတွက်ရှေ့ဆက်အချိန်။ ø၊ႏွဟန္ဆယ္န္၊ကရှင်းပြသည်ဒီနေရာတွင်မိနစ်လေးဆယ်-တစက္ကန့်၊အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်ရစေခြင်းငှါကောင်းတစ်စိတ်ကူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်ရန်ပုံငွေအညွှန်းကိန်းနှင့်အတူအနိမ့်သို့မဟုတ်လုံးဝမ-အကုန်ကျစရိတ်။ သုံးဒစ် ø။ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်သင်တို့သည်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ပင်စင်အတွက်နော်ဝေ၊ဆွီဒင်နှင့်ဖင် မှမကုန်ကျမှာကို ပွဲ၊စီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေး။ ကိုယ့်အဖြစ်အတူပူးေ ၊သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပမာဏအတွက်အသုံးပြုသည့် ၊အတော်လေးလွတ်လပ်ဘယ်အရာ၏အဘိုး၏အ သည်။ အသုံးပြုသည့် သာဖြစ်ကုန်သွယ်ကနေလိမ့်မည်။ အားလုံး အညွှန်းကိန်းများရန်ပုံငွေကအောက်ပါအတိုင်း၊အသီးအသီးနှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဒစ်အညွှန်းကိန်းအတက်-နှင့်အခ်ိန္ေ။ ရန်ပုံငွေ'စွမ်းဆောင်ရည်မည်မဟုတ်အားဖြင့်ကန့်သတ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုစီမံခန့်ခွဲမှု။ သင်ကပေးဆောင်အဘယ်သူမျှမ၊အရစ်ကျအခကြေးငွေအခါကုန်သွယ်ရေး ၊အဆိုပါရန်ပုံငွေများကိုတိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်ရန်အတွင်းဖက်ကတန်ဖိုးထား။ မတူဘဲသာမန်ဒိအလှန်ရန်ပုံငွေများ၊မရှိတစ်ခုခု ။ အဆိုပါစျေးနှုန်းသည်တူညီသောရှိမရှိ၊သင်ဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခါသင်ရောင်းမဝယ် မှအခြားဒစ်နိုင်ငံများအရတစ်သွယ်ဝိုက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုငွေကြေး။.
အလုပ်သွား၊ပြီး စီးပွားရေး၊အဝင်အခြေခံအကျဆုံးသတင်းအချက်အလက်နှင့်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်။ ဒါဟာလုံးဝအခမဲ့ဖွင့်ဖို့အ ။ ကောင်းစွာသင်တို့မှတ်ပုံတင်ရန်၊သင်လိုအေလ်ာက္ခံယူ၏တြက္သာျရေအတွက်ကိုဆိုရင်၊သငျသညျခြစ်ကို'တြက္သာျမှတ်ပုံတင်ခြင်း'။ ကြောင်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်က္မႈလုပ္ငန္းထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သွားဆရာဝန်၊ ၊စသည်တို့ကို။ ရမည်အမှန်ခြစ်ကို'လစာအခွန်'။ သင်စတင်ရပါမည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်သည့်တစ်ဦးတည်းသော ၊အဖြစ်အများဆုံးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊သင်ရမယ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွေ့အၾကာက၏တစ်ဦးတည်းသော ။ အခါစာမ်က္ႏွာ၊ဖြည့်ရမယ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်၊အမျိုးအစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်ချင်တယ်ဆိုရင်၊သင်န်ထမ်းများ၊ပို့ကုန်ဒါမှမဟုတ်သွင်းကုန်။ ငယ္သင်ဖွင့်လှစ်မှတ်ပုံတင်တစ်ဦးတည်းသော နှင့်အတူသင့်ရဲ့ ၊သင်လိုအပ်ရုံနှိပ်ပါပေးပို့၊နှင့်အားလုံးသင့်ရဲ့အချက်အလက်ပေးပို့လိမ့်မည်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်။ သင်အခုတော့ပိုင်ရှင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင်အလွန်လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ (ဗဟိုစီးပွားရေးမှတ်ပုံတင်)အရေအတွက်ကို။ အထွေထွေမိတ်ဖက်အတွက်ဖန်တီးကဲ့သို့တူညီသောလမ်းကိုအတစ်ဦးတည်းသော ။ ကိုယ့်အတွက် တစ်ခုထက်ပို။ အားလုံး၏ပူးေ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရမည် å အတွက်အပြီးပူးတွဲပြီး များအတွက်တာဝန်ရှိပူးေ့အကြွေး။ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်လျှင်ပိုင်ရှင်များအတွက်ပိုက်ဆံကိုဘဏ်သို့မဟုတ်ရှယ်ယာထဲမှာတိုက်ခန်းတစ်ခန်း၊နှင့်အခြားအဘယ်သူမျှမ ပိုက်ဆံရှိပါတယ်၊တူ၊သူကံဇာတာ၊လာဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သည်။ ကြွေးမြီအဖြစ်၊ ခဲ့သည္။ အ ææ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်တစ်ပြားမှ။ အ'အနည်းငယ်သာအစ်ကိုအ ၊၊သို့သော်၊သင်လျှောက်ထားရန်အချို့ကိုတင်းကြပ်လိုအပ်ချက်များကိုများအတွက်စုဆောင်းခြင်း၏မြို့တော်။ နိုငျသောအခြားသောအရာတို့ကိုအကြား၊အမွတ္မြတ်များပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ၅၀။ ၀၀၀ ။ တက်ကုမ္ပဏီအတွက်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင် ææ လည်းသီးခြားတရားဝင်အ ၊ဘယ်မှာသင်တယောက်တည်းသာဖြစ်ကြောင်းအထိုက်အတူသင့်ရဲ့သိုက်။ ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီအဖြစ်သီးခြားတရားဝင်လိုအပ်သော၊၅၀။ ၀၀၀ ။ အစမြို့တော်။ သင်ပင်ဖန်တီးခြင်း၊သို့မဟုတ်သင်ရနိုင်စာရင်းကိုင်သို့မဟုတ်ရှေ့နေဘို့အထိုသို့ပြုမှ ၂-၃။ ၀၀၀ ။ အ æ တစ်ဦးတည်းသင်မြို့တော်သို့ထားကြပြီ၊ဒါပေမယ့်ဘဏ်မကြာခဏလိုအပ်သော အတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့အကြွေးတွေအနှံ့။ သငျသညျရရအဆိုပါကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကရှိပါတယ်၊အမျိုးမျိုးသောအမှုအရာသင်ပြင်ဆင်ကြပြီ။ အခ်က္ကန့်သတ်ပေးရန်တာဝန်ကကုမ္ပဏီအဖန်တီး ။ စေလျှင် æ စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ဆိုလိုသည်။ ဝယ်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုထုတ်လုပ်ရန်၊သင်ရောင်းဖို့ဖောက်သည်များနှင့်သင့်ဝင်ငွေသည်အောက် ၅၀။ ၀၀၀ ။ အပေါ်အနှစ်၊သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး၏။ သို့သော်၊သင်ဆဲလိုအပ်ရန်ပေးဆောင်အပေါ်အခွန်၏အမြတ်အစွန်း။ အ ရမည်မဟုတ်တာဝန်ခံတြက္သာျနှင့်လည်းမဆွဲအတြက္သာျဖစ္သည္။ အခမဲ့ ၏နေ့ရက်များရဲ့အဖွဲ့ဝင်များ၊အရာအညီသင်ရှာတွေ့ဖို့ပိုအလုပ်ေဆာင္တာမ်ားႏွင့္အတူမိမိအလုပ္ရွိလူသင်သည်သင်၏ဧရိယာ၌။ ၁။ ရှာပြီးလေလံအပေါ်တာဝန်များကိုကနေအ å သို့ ဘယ်မှာကုမ္ပဏီနှင့်အများပြည်သူအလောင်းကောင်၊အဆိုပါလုပ်ငန်းများအတွက်ပူဇော်ဖို့အားလုံးအဖွဲ့ဝင်များကိုငါ။ ဒီေနရာကို-သူတို့တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အသေးစားအုပ်စုများ။ ၂။ ၾကာ္ျကောင်းတစ်ဦးကမ်းလှမ်းချက်ကိုအတွက်-နှင့်တိုးမြှင့် å သင်ဖန်တီးကိုးကားမှာ ၊သင်ဟာသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်လုပ်ကိုင်နေ့ရက်များ-အဖွဲ့ဝင်များသည်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ပျောက်ဆုံးနေအတိအကျသင်သည်အဘယ်သို့ပေးနိုင်။ တစ်ကိုးကားနိုင်ခြင်း။ သူ။ အတိအကျအပေါ်လျှော့စျေးသင်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်။ ၃။ ဖန်တီး ပုဂ္ဂလိကပူဇော်ကိုရှာဖွေကူညီသောအခါသင်မရှိခြင်း သင်တို့အဘို့အရှာကြသည်အကူအညီများအတွက်အလုပ်တခုကို၊သင်ပင်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်ပူဇော်ရရန်အရည်အချင်းပြည့်လေလံမှမိမိအလုပ်သမား။ ဖန်တီးသည့်အခါတစ်ဦးကမ်းလှမ်းချက်သင်တို့အဘို့အထို့ကြောင့်ပင်ကွန်ကရစ်ပေါ်မှာပူဇော်အလုပ်တခုကို၊သင်ခဲ့ကြရပါမည်ပြေ။ ၄။ အလုပ်များရရှိဖို့မြေပုံ -အက္ပ္သင်လျှောက်ကြားသောအခါရှိသူများကဖန်တီးတစ်ဦးလေလံသို့မဟုတ်ကိုပူဇော်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမှသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ သင်ရွေးချယ်သည်အဘယ်သို့စိတ်ဝင်စားဖို့များအတွက်သင်နှင့်သင်အမြဲပိတ်အလိုအလျှောက်မက်ဆေ့ခ်ျများမှနောက်တဖန်အ။
သင်တို့အပေါ်မှာသွားလျှင်ဗီဇာ၏သက်တမ်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုရန်ကြိုးစားနေ ကို အောင်မြင်သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့အတွက်ဒိန်းမတ်၊သင်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါအ ကာလ ၃-၅ နှစ်။ အစောင့်ဆိုင်းကာလအတွင်း၊သငျသညျမရနိုငျသောအဇာရန်ဒိန်း။ ဗီဇာခွင့်ပြုဗီဇာကိုင်အခွင့်နေထိုင်သင့္ေတာ္ေသာနိုင်ငံပေါင်းအတော်များများများအတွက်ရက်ပေါင်း(အမ်ားဆံုးရက္ေပါင္း ၉၀)အတွင်းသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလ၏သက်တမ်း။ သက္တမ္းဗီဇာအားဖြင့်သက်သေပြနေသည်ကို ထားအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ အဆိုပါဗီဇာကိုင်ရမယ်နှစ်ဦးစလုံးလိုက်နာနှင့်အတူသတ်မှတ်ထားတဲ့အရေအရက်နှင့်သတ်မှတ်ထားသောသက်တမ်းကာလ။ သင်ထို့ကြောင့်ထက်မပို၏အရေအတွက်ရက်သို့မဟုတ်ရက်စွဲများကိုနှိပ်ပါ။ ဒါဟာအလွန်သတိပြုမိဖို့အရေးကြီး၏သက်တမ်းအဇာ၊အဖြစ်အနက်အကျိုးဆက်များရှိသည်နိုင်လျှင်၊သင်ထွက်ပေါက်လည်းနောက်ကျ။ သင်တို့အပေါ်မှာသွားလျှင်ဗီဇာ၏သက္တမ္း၊သင်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါအ ကာလ။ အစောင့်ဆိုင်းကာလအတွင်းသာမန်)၊သငျသညျနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်မှခွင့်ပြုဗီဇာဒိန္း။ သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်၊သို့သော်၊အမရာထိုကာလကိုစောင့်ဆိုင်းလျှင်၊သင်သက်သေပြနိုင်ပါကအလျှံမှုကြောင့်ဖြစ်ကြိုတင်မှန်းဖြစ်ရပ်များ၊အရာသင်ပါဘူး တောင်ပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၊ဥပမာ-ယာဉ်အသွားအလာနှောင့်နှေး၊ သို့မဟုတ်အလေးအနက်နာမကျန်း။ သင်သည်လည်းချမှတ်မည်မဟုတ်အပေါ် ၊မယ်ဆိုရင်ဒါဟာစဉ်းစားသည်ငြင်းဆန်များ၏ဗီဇာလိုဖွဲ့စည်းတဲ့တုန့်ပြန်၊ဆွေမျိုးအပြုအမူသင်ရုပ်ပြအတွက်အသင့်ရဲ့ယခင် ။ လျှင်သင်အသုံးပြုကြိုးစားသောအ သာဒိန္းသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် အောင်မြင်ရန်ရေရှည်သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေထိုင်၊သင်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါအ ကာလ။ ဆိုလိုကြောင်းသင်၌ကာလအချိန်တစ်ဦးစတင်အဖြစ်အမှတ်ဖြင့်အာဇာကိုဒိန္း။တစ်ဦးစတင်အဖြစ်အမှတ်၊ထိုကိုင်ဆောင်သူ၏ဇာတစ်ခုအားဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ကာလငါးနှစ်၊သူသူသည်အောက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းများအတွက်နေအိမ်သို့ပါမစ်ဒီမှာတိုင်းပြည်အတွက်။ တစ်အများအပြားနေအိမ်သို့ပါမစ်စေခြင်းငှါ၊သို့သော်၊ပုံမှန်အားဖြင့်ရှာသောအောက် ခြင်းမရှိဘဲ၊ဒါကြောင့်ဦးဆောင်ဖို့အစောင့်ဆိုင်းကာလ။ အဆိုပါကိုင်ဆောင်သူအဇာမည်မဟုတ်တစ်ခုအားဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည် ကာလကိုအောက်ပါကိစ္စရပ်များတွင်၊။ ဥပဒေ§လေး(ဂ)။ လေး(ကရင်):ပါကလျှောက်လွှာများအတွက်နေအိမ်သို့ပါမစ်စိုးရိမ်ပူပန်မှု မိသားစုသယ်၊နှင့်အကိုင်၏ဗီဇာတစ်ခုခုကိုတစ်ဦးအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်အောက်မှကလေးတဆယ်ငါးနှစ်၏၊ထိုတွင်နေထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်ဒိန္း၊။ ဥပဒေ§၉၊အပိုဒ်။ ၁၊အဘယ်သူမျှမ။ တစ်ဦးသို့မဟုတ် ၂။ အကယ္လီကေးရှင်းများအတွက်နေအိမ်သို့ပါမစ်တင်သွင်းရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်။အထူးအခြေအနေ၏ဖြစ်ရပ်အပြီး၊ကိုင်ဆောင်သူ၏ဗီဇာကိုအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်အောက်မှကလေးတဆယ်ငါးနှစ်၏၊ထိုတွင်နေထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်ဒိန္း၊။ ဥပဒေ§ကိုး(ဂ)။ ၁။ အကယ္လီကေးရှင်းများအတွက်နေအိမ်သို့ပါမစ်သက်ဆိုင်သောအ ပြီးနောက်ဂြိုဟ်သား§နီ)။ တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုပေးသည်။ ဃ။ပညာေရးအောက်ပိုင်းကိုး၏စည်းမျဉ်း။. ၂။ အကယ္လီကေးရှင်းများအတွက်နေအိမ်သို့ပါမစ်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်ဒါခေါ် (ဆိုလိုသည်။ အကယ္ကိုင်အဇာ;အတွက်စေ့စပ်စာပေလှုပ်ရှားမှုများကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးနေအိမ်သို့အတွက်အစည်အဖြစ်၊၏အစိတ်အပိုင်းစည်ပင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း)၊။ ဥပဒေ§ကိုး(ဂ)။ ၄။ အကယ္လီကေးရှင်းများအတွက်ခွင့်ပြုခဲ့တွင်တင်သွင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အလုပ်အကိုင်။ ဥပဒေ§နီ(တဲ့)။ ၂၊အမှတ်။ ၁-၁၁၊သို့မဟုတ်အပိုဒ်။ ၃။ ပါကလျှောက်လွှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများတစ်ဦးနေအိမ်သို့ပါမစ်များ၏အခြေခံပေါ်မှာနိုင်ငံတကာဥပဒေ။ ဥပဒေ§နီ)။ ၁၊၁။ ။ အကယ္လီကေးရှင်းကိုရည်ညွှန်းသည်ပါမစ်အဖြစ်မှအနားယူသည့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်မိသားစု)။ ဥပဒေ§နီမး)။ ၁၊နှစ်ခုသို့မဟုတ် ၃။ အကယ္ကိုင်အဇာပြီးနောက်လျှောက်လွှာကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့အဘို့အနေအိမ်သို့ပါမစ်၏ထွက်ပေါက်သင့္ေတာ္ေသာနိုင်ငံများနှင့်အညီထုတ်ပြန်ဇာရဲ့သက်တမ်း။ လျှင်ပင်လျှောက်လွှာများအတွက်နေအိမ်သို့ပါမစ်သည်အထက်တွင်သတ္မွတ္ေ၊သို့သော်၊ဖာက္ၾကတဲ့ကာလကိုစောင့်ဆိုင်းလျှင်၊အဆိုပါ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လျှောက်လွှာကိုတစ်ဦးနေအိမ်သို့ပါမစ်အရသင့်ရဲ့နေထိုင်တိုးချဲ့ဒီမှာတိုင်းပြည်အတွင်းကထင်ရှားသောလျှောက်လွှာများအတွက်နေထိုင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်၊။ ဥပဒေ§လေး(ဂ)။ ငါး(ကရင်)။ အဆိုပါကိုင်ဆောင်သူအဇာတစ်ခုအားဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည် ကာလငါးနှစ်လျှင်၊သူသူမကိုပြီးနောက်၊ကြရက္ပ်က္မအုပ္ခ်ဳပ္ေသို့မဟုတ်အားဖြင့်တရားစီရင်။ အဆိုပါကိုင်ဆောင်သူအဇာလိမ့်မည် မရွိတဲ့ ကာလငါးနှစ်လျှင်၊သူသူမကိုပြီးနောက်၊အံ့လျှောက်လွှာတင်သွင်းများအတွက်ခိုလှုံခွင့်အတွက်ဒိန္းသို့မဟုတ်အခြား ။ ဒါေပမယ့္ယမ လျှင်၊လျှောက်ထားရေးကိုအထောက်အလင်းနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးနောက်ဆန္ဒအလျောက်နောက်ဆုံးအငြင်းဆန်၏လှုံ။.
ရှေ့နေတစ်ဦးအဖြစ်ဦးဆောင် ဂင်အတွက်ပါဝင်သည်ဟု၊ ၊ ø၊မာတင် ဟန္ဆယ္န္၊ အို နှင့် အဲန် ø။ အဖြစ်ကာကွယ်ရေးရှေ့နေ၊ငါတို့သည်ကျွမ်းကျင်သူများကအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်သိရသည်၊ကတည်းက ၁၉၅၁၊ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးအချို့အများဆုံးလူသိများကိစ္စများအတွင်းစီးပွားရေး၊ များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်။ အပါအဝင် ၊၊အဝါရောင်ဖျားနာမှု၊ လမ္း-အမှုပေါင်း၊ မွ ၊ နှင့် ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လုယက်မှာဘာသာပြန် æå။ ရှေ့နေအဖြစ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အကူအညီ၊အမျိုးသားအသင်းများ၏ကာကွယ်ရေးရှေ့နေများအသင်း၏ စ္ပတ္အတြင္းဂင်နှင့်ငှါးခံနိုင်ပါတယ်ကျော်တိုင်းပြည်အတွက်၊ထိုအမှုကိစ္စအကာအကွယ်သောသူ၊တရားရုံး၊အမြင့်ဆုံးတရားရုံးနှင့်တရားရုံးချုပ်။ သငျသညျမဆိုမေးခွန်းများရှိပါကဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးသင်ကူညီခြင်းနှင့်သင်၏အမှု။
ö å လို ä စာမ်က္ႏွာ အပေါ်ö။အတူထိုကဲ့သို့သော နိုင် ပြား å။ ဘရာစီယာအစီအစဉ် ä ကြောင်း ä တိုင်ပြီးနောက်ရှေ့နေအထက်တန်းကျောင်း ä ၊ အစီအစဉ်၊ အစီအစဉ်၊ သို့မဟုတ် ä။ အစီအစဉ် တန်ခိုးတော်ဖြစ် ä ö ö တိုင် ။ Ä နိုင်နတ် ဘကောင့်ဝင်လျှင်၊သင်သည် ä ä တိုင် ၁၂။အာဏာ၏:ä. ဏာ ၊ä ။ သို့မဟုတ်: ၁ ၁၁ နှင့် ၁၂၊ä ၁ ၁၁ နှင့် ၁၂။ (åö တစ်ဦးသို့မဟုတ် ၁)အဖြစ်ရှေ့နေ အပေါ်သင် å သို့မဟုတ် å ä တစ်ဦးချင်းစီ၊ö အဖွဲ့အစည်းအတွက် å။ ဒါဟာ ä အဖြစ်သင်ရှေ့နေ မှာအသေးစားရုံး ä တဲ့ သုံး ä ရှေ့နေ။ å အဖြစ်ရှေ့နေ၊နတ် ä၊ää သို့မဟုတ် å။ ö ဟာ ä ရှေ့နေ ä လူ ä အဖွဲ့ဝင်၏အကူအညီ။ ö လာ ရှေ့နေဟာ ö မှီတိုင်အောင်အလုပ်လုပ်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ငါး å ။"တိုင် အုပ်ချုပ်ရေး၊"တိုင်"-Ö.
လျှင်သင်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်ပင်စင်သို့မဟုတ်အိမ္ရာအကျိုးသို့ပြန်ငွေပေးချေမှုဒိန္း၊သင်ရွေးချယ်စရာရှိသည်ဖို့ပေးဆောင်ငွေပမာဏနှင့်အတူကနေတဆင့်ငါ့ '။ သင်ကပေးဆောင်မယ်ဆိုရင်ပုံသေလစဉ်ငွေပမာဏသို့အလှူငွေ၊သို့မဟုတ်အရစ်ကျ၊သင်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ငွေပေးချေမှုမှတိုက်ရိုက်ငွေထုတ်။ သင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါပေးသွင်းများအတွက်တိုက်ရိုက်ငွေထုတ်၊သူတို့ရေးဆွဲအလျောက်၊ဒါကြောင့်မလိုအပ်ပါဘူး။ သတင်းအချက်အလက်သင်အသုံးပြုမှတ်ပုံတင်ရန်သောငွေပေးချေမှုများအတွက်တိုက်ရိုက်ငွေထုတ်၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အပေါ်ငွေပေးချေမှုအလစ်တွင်အစုဆောင်းခြင်းမှဆုတ်ခွာဒိန္း။ သာအမှုအရာအတွက်ငွေပေးချေမှုဒိန္းလျှောက်ထား၏တစ်ဦးငွေပေးချေမှုအပေါ်ကိုင်ထားလျှင်၊သင်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်အပေါ်ဏာအပေါ်တိုင်ကြားရည်အအိမ္ရာအကျိုးကျေးဇူးများ။ ဒီမှာငွေပေးချေမှုအတွက်ကိုင်ဆွဲပေါ်တွင်တင်ပါလိမ့်မယ်တိုင်အောင်သင်အဖြေများအရ။ သင်တောင်းဆိုချက်ကိုအ ၏ပေးချေမှုဒိန္းလျှင်၊သင်သည်ဆပ်ဖို့ရှိသည် ပိုက်ဆံပြန်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊သုံးအဝန်ဆောင်မှုအဖြေ'တာင္း '။ လျှင်သင်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်အညီစုဆောင်းထက်ခုနစ်ပြောဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှု။ ဤအမှု၌၊သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ရ ၏ပေးချေမှုဒိန္း၊သင်ပေးဆောင်ပိုက်ဆံနောက်ကျောအတွင်းနှစ်ဆယ်လေးလ။ ထို့အပြင်မှပြန်ဆပ်ဖို့တွေအနိမ့်ဆုံးမှာတသိန်းထပ်။ အလုပ္။ သင်ကမဆပ်ကြပါလျှင်အရစ်ကျအပေါ်အချိန်၊ငွေပေးချေမှုနှင့်ဖျက်သိမ်းဒိန္းသင့်ရဲ့ ။ အဲဒီအစား၊သင်ပေးဆောင်ရပါမည်အရာကြွင်းလေငွေပမာဏအကြွေး၊တစ်ကြိမ်မှာ။ သင်ဆဲမဟုတ်ကြဘူး၊အဆိုပါပမာဏဆီသို့စေလွှတ်နိုင်ပါတယ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူ æ။ သင်အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ဆိုလိုတယ်ဆိုတာသို့စေလွှတ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူ æ:သင်ကျော်လွန်တစ်ဦးအခေါ်အဝေါ်အတွက်ငွေပေးချေမှုအခကြေးငွေကောက်ခံ၊သင်တို့ကိုစေလွှတ်လိမ့်မည်၊တစ်သတိပေး၏ငွေပေးချေမှုနှင့်အတူကြေး၏ ၂၅၀။ မှတ်ချက်၊အဘယ်သူမျှမအခကြေးငွေအပေါ်သတိပေးချက်များနှင့်သက်ဆိုင်အိမ္ရာအကူအညီ။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်အမကိုသတိပေး အပေါ် øå။ သင်ကမဆပ်ကြပါပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးသတိပေး၊သင်တို့ကိုစေလွှတ်လိမ့်မည်နောက်ထပ်သတိပေး။ အဖြစ်မကြာမီသင်ကျော်လွန်တစ်ဦးငွေပေးချေမှုကာလ၊သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုအတွက်မှတ်ပုံတင်မည်ဖြစ်ဖို့အထား-ချွတ်၏æ။ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှင်၊သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုအတွက်မှတ်ပုံတင်ဖို့အထား-ချွတ်၏æ:ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီဆိုရင်တစ်ဦးငွေပေးချေမှုကနေဆုတ်ခွာဒိန္း၊အရာသင်ပေးဆောင်မှတဆင့်သင့်ရဲ့နိုင်ငံခြားဘဏ်၊သင်တို့သည်ငါတို့၏ကိုသုံးနိုင်သည်စားခ်ိန္အနှင့်လျင်မြန်သောရေအတွက်လွှဲပြောင်းရန်သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှု။ အစု၏အငွေပေးချေမှုလစ္ေဖြင့်စေလွှတ်လိမ့်မည်ဒစ္ဂ်စ္တယ္။။။။။ သင်ထို့ကြောင့်သတိရဖို့အသင့်အီးမေးလ်စစ်ဆေးကွက်လျှင်၊သင်ပျောက်ဆုံးနေ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်မှကင်းလွတ်ခွင့်ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာတိုက်နှင့်ပျောက်ဆုံးနေငွေပေးချေရပါမယ်၊ဆက်သွယ်အစုဆောင်း၊ဒါကြောင့်သင်ရနိုင်ပို့အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်း။ ပေးချေမှုဒိန္းကဲ့သို့အမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်။ လျှင်သင်ရေးထားပြီမှဆုတ်ခွာဒိန္း၊သင်အတွက်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်ဖြေနှစ်ဆယ်အတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ရက်ပတ်လုံး။ သင်မကျေနပ်လျှင်၊သင်ဆက်သွယ်ပါရန်အပေးချေမှုဒိန္း။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် သဘောမတူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆင်ရန်စုဆောင်း၊သင်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ကိုအကြောင်းတိုင်ကြား။ ပေးချေမှုဒိန္းရှိရမယ်၏တိုင်ကြားချက်၊အဘယ်သူမျှအကြာတွင်ထက်လေးပတ်ကြာပြီးနောက်သင်ခံရကြပြီ။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳ ။ ကျွန်တော်တို့ကြီးမားတဲ့စာရင်း၏ရှေ့နေများအတွက်ဒိန္း၊ဘယ်မှာသင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အတွက်ရှေ့နေကနေတဆင့်ပထဝီရှာ၊သို့မဟုတ်အထူးကုနှင့်ကမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ရှေ့နေ။ ဘယ်လောက်သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်ရယူကိုးကားနှင့်နှုန်းထားများမှအရှေ့နေများအတွက်ပြဿနာသင်လိုချင်သောအရာကိုကူညီပါ။ ကြည့်သင်မည်သို့ရယူရှေ့နေအပေးအယူ။ ဒါဟာတကယ့်ကောင်းသောစိတ်ကူးရရန်တစ်ဦး၏အကြံပေးချက်မှာရှေ့နေဆက်သွယ်နှင့်ကွာရှင်း။ အဆိုပါရှေ့နေ သေချာအားလုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာနှင့်အတူ၊အာမခံ၏အကျိုးစီးပွားရေးနှင့်ဆက်စပ်။၌ကွာရှင်းခွင့်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်။ အကြံဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်။ ရှိပါတယ်အများစုကအကြောင်းပြချက်ကောင်းရဖို့ဥပဒေအထောက်အကူခြံမြေ၏ရှေ့နေနှင့်ဆက်စပ်ဝယ်ယူများပိုင်ဆိုင်မှု။ အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအလုပ်အိမ်တအိမ်ကိုဝယ်ယူ၊အလွန်အကြိမ်အနည်းငယ်၏သင်တန်းတွင်အသက်နှင့်ထိုကြောင့်၊အစဉ်မပြတ်အဘယ်အရာကိုအပေါ်မျက်စိသိုထားအခြေအနေ။ အ ကူညီနိုင်သင့်ရဲ့သွားရာလမ်းပေါ်တွင်ကောင်းစွာသင်အနှံ့ဝယ်ယူဖြစ်စဉ်ကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကအိမ်ရှေ့နေ။ ခွန်နိုင်အလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးပြီးဧရိယာနှစ်ဦးစလုံးအတှကျပုဂ္ဂလိကများနှင့်ကုမ္ပဏီများ။ အတူအကြံဉာဏ်သင်သေချာသင်ဆပ်ဖို့မသွား အလွန်အကျွံအတွက်အခွန်၊ကိုယ့်ကြောင့်။ သင်ခဲ့ထြက္ဆႏအပေါ်ဥပဒေပြဌာန်း။ သင်မည်သို့ရနိုင်အကူအညီမှရှေ့နေတစ်ဦးအတွက်အခွန်ဥပဒေ။ ဖြစ်ချင်လျှင်လုံးဝသေချာသူအထဲမှာရှိပြီးနောက်သင်၊မည်သို့အများကြီးဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာတိကျတဲ့အမှုအရာ၊ဒါကြောင့်ကောင်းတစ်စိတ်ကူးကဆက်သွယ်ဖို့ရှေ့နေတစ်ဦး နိုင်သည့်လမ်းညွှန်အားဖြင့်သင့်ကိုလက်ရှိဥပဒေ၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဖန်တီးကူညီပေးပါမည်၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်လုံခြုံသောအပိုဆောင်းအပြင် ။ ခန့်ထားပြီမှတစ်ဦးလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့၏။ မစၥရှေ့နေတစ်ဦးအမှန်တကယ်သင်ကူညီနိုင်ပါနှင့်အတူ။ အခါဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အတွက်အခြေအနေဘယ်လိုရှေ့နေတစ်ဦး၊ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သိသင်သည်အဘယ်သို့အမှန်တကယ်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်ရှေ့နေများ၏ကြိုတင်မဲအတွက်။ ဥပဒေရေးရာအကူအညီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါး။ တစ်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတွင်တည်ရှိသည် ။ ကျနော်တို့အတွက်အထူးပြုမိသားစုဥပဒေ၊စိန်း၊လူမႈဝန္ထမ္းဥပေဒ။ အဆိုပါဥပဒေတွင်ခိုင်မြဲသော æ ø အထူးပြုသင်ပုဂ္ဂလိကအတွက်ဥပဒေနှင့်အတူအာရုံစိုက်ထိန်းချုပ်ဥပေဒတမ်း၏ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းအိမ်ခြံမြေအဖြစ်ကူးပြောင်းရေးပါ။ ကျနော်တို့ပေးအထူးပြုနှင့်ရိုးသားသောအကြံဉာဏ်မှာမျက်စိ-အဆင့်မှတရားမျှတတဲ့စျေးနှုန်း။ အမည်ပေး၏စိတ်ငြိမ်။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည်လွယ်ကူစေရန်အတွက်မိသားစုအတူလိမ့်မည်။ အမည်ကေတာ့တယ္လီဖုန္း။ သငျသညျမဆိုမေးခွန်းများရှိပါက၊သငျသညျယူနိုင်ပါသည်အတူ အထူးပြု တယ်လီဖုန်းအပေါ်။ တႏိုင္ငံ၊ကိုချီးမွမ်းကြ၏။ လိုအပ်ကူညီရန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း။ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက်အထူးပြုမိသားစုဥပဒေ၊လျော်ကြေး၊ဆက်နဲ့ကော။ လည်းအရေးပါ၏မိဘတာဝန်နှင့်ကလေး၏အရပ်၏နေအိမ်သို့ဆောင်ခြင်းကိစ္စ။ သင်မည်သည့်ကောင်းသောစိတ်ကူးများ၊အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်မေးခွန်းများအကြောင်းအရာ၊ဒါကြောင့်သင်အမြဲကြိုဆိုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ပူးပေါင်းအခါသင်အထမ်းများအတွက်သင်တန်းအများအပေါ် - ဝက်ဘ်ဆိုက်၊သင်အလိုအလျှောက်သို့အလ့က်။ ဒါဟာ အသုံးဝင်အားလုံးအတွက်မွေးပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းသင်ဖြည့်စွက်တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုများအတွက်သင်တန်း။ သင္တန္းနိုင်ဖို့အကြုံအဖြစ် နည်းနည်းစပ္ထားရှာတွေ့၏လမ်းအတွက်ပတ်ပတ်လည်။ ထို့ကြောင့်၊ကျနော်တို့မှာ -၊ထောက်ခံမှုစားနိုင်သော်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်၏။ ဖုန္းကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းအုပ်ချုပ်ရေးထို့နောက်အွန်လိုင်းမှာ'သင့်'မျက်နှာပြင်ကိုအားဖြင့်သင့်ကိုလမ်းပြ။ သင်သည်လည်းစတင်အားဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအထောက်အပံ့အကူအညီကိုရှာ။ အထောက်အပံ့စာမျက်နှာကြာသင်ဒီမှာပါ:တံဆိပ်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုဖို့အီလက်ထရောနစ်မှတ်ပုံတင်များအတွက်ကုမ္ပဏီများ၊အမိန့်များကိုဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်များ၊ပလီကေးရှင်းများအတွက် -စရိတ်အဖြစ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာယူဆ။မီတာ။မှာ -၊ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ထမ်းဖြစ်လာဖို့အရည်အချင်းပြည့်နှင့်အတူပညာရေးနှင့်သင်တန်းများ၊အရာအဓိကအားဖြင့်အဆင်ပြေအောင်လိုအပ်ချက်များကိုကုမ္ပဏီ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏အႏုပညာနှစ်ခုလုံးကိုထည့်သွင်းတိကျတဲ့ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အဖြစ်ပိုပြီးယေဘုယျအရည်အချင်း၊မရှိဒေါင်းလုပ်များအတွက်ဝန်ထမ်းမှာအားလုံးအဆင့်ဆင့်၏အဆိုပါကုမ္ပဏီ-စ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအစဉ်အမြဲအဆင်သင့်ပေါ်တွင်အကြံပေးဖို့အကောင်းဆုံးအစီစဉ်၏လုပ်ငန်းပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး။ နှင့်အတူသူတို့အတွက်-အနက်အသိပညာ၏နှစ်ဦးစလုံးထောက်ပံ့ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးရှုထောင့်အရွယ်ရောက်ပညာရေး၊သင်သေချာအရအမှန်အဖြေ။ တဦးတည်းအရေးကွီးဝိသေသလက္ခဏာများအသစ် - ပြီတစ်ဦးအားကြီးသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ ဆိုလိုသည္မွာအစီအစဥ္မ်ားကောင်အထည်ဖော်နိုင်နှင့်အတူအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရုံစိုက်ဖို့ကော်ပိုရေးရှင်း၏ပုံစံများအလုပ်၊ဥပမာအားဖြင့်ပြန့်ပွားဖြစ်စဉ်ရက်ပေါင်းများစွာကျော်၊ချပြီးအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းအများကြားတွင်တနင်္ဂနွေ၊နှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်ဖို့ထား၏အစိတ်အပိုင်းသင်တန်းမှအဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်များ။ အဆိုပါသင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အားလုံးမျိုးကွဲ။ မန်နေဂျာနှင့်အလုပ်သမား။ ခွင့်ပြု -စရိတ်တက်ဖို့အမြင့်ဆုံးကိုနေ့စဉ်စရိတ်အတွက် မိန့်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေး၊သင်သာရနိုင်သောအ ထောက်ပံ့ကြေးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်အသုံးပြုသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအတွက်အဆိုပါနောက်ဆုံးငါးနှစ်ကြာ။ သင့်ရဲ့န်ထမ်းဖတ်- လုံးဝအတားအဆီးမရှိရှေ့ဆက်နိုင်ရန်အတွက်။ ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကူညီနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကူအညီ။ သွယ်တန်းတိုင်ပင်မှာ ၆၆ ကိုု ၆၆ ခုနစ်ဆယ်ဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အကြောင်းကိုပိုမိုသိ သင်တန်းအတွက်အခွင့်အလမ်းသင့်ရဲ့န်ထမ်း။ အတွက်အချိန်ကဲ့သို့ဤအရပ်နိုင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်၏လျော့ချရေးနှင့်အတူထမ်း၊အ - လည်းကူညီနိုင်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူကူညီအကြံဥာဏ်နှင့်လမ်းညွှန်မီသင်ကတစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်အောင်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကျနော်တို့ကူညီနိုင်နှင့်အတူအကဲဖြတ်ခြင်း၊အလုပ်ရှာဖွေရေးအကူအညီ၊။ မီတာ။ သူတို့အဘို့၊ထမ်းသောသူဖြစ်ရထားခဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်-ဆက်စပ်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ၊ဝန်ထမ်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။ သင်ရင်ဆိုင်ရန်ရှိခြင်းလေးကိုချွတ်ပိုကြီးတဲ့အလုပ်သမားဦးရေ၊ကျွန်တော်တို့အတွက်-နှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်အစင်တာနှင့်အခြားပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း-အစီစဉ်များအတွက်အလုပ်လုပ္နည္း။ ဒီပေးသည်၊သင်သည်သင်၏န်ထမ်းမှလက်လှမ်းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံသင်တန်း၊ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းနှင့်အရည်အချင်းကိုအကဲဖြတ်ခြင်း၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း။ မီတာ။ ထိုအမျှော်လင့်အများအနေနဲ့ပိုမိုလွယ်ကူလမ်းမှအလုပ်သစ်။ သွယ်တန်းတိုင်ပင်မှာ ၆၆ ကိုု ၆၆၇၀၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းပိုမိုသိအသက္ရွင္သန္ေ၊ သို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူး။.
အန္တရာယ်သတိပေး:သင့်ရဲ့မြို့တော်သည်အန္တရာယ်မှာ။ အထူးစီးပွားရေးဧရိယာများမှာဒွိရွေးချယ်စရာသာပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ အမသတက္ေထားခဲ့ပါ။ အဓိကကသတ်မှတ်ကြောင်းအရာတစ်ခုမှတစ်ပါးအခြားကုမ္ပဏီရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိရိယာများအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များ။ ကို ၁၈၀ ကုန်သွယ်၊အားကြီးသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များအတွက်အရင်ကဆိုရင်နှင့်အကျိုးရှိစွာနည်းပညာပံ့ပိုးမှုလုပ်တစ်ဦးသည်အဆိုပါကုမ္ပဏီနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအလက်။ အပိုဆုအစီအစဉ်နှင့်အမျိုးမျိုး၏လောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေမှကုမ္ပဏီအကုန်လုပ်နှင့်အတူပူးပေါင်းကုမ္ပဏီအမြတ်အစွန်းကိုသာအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်။ ပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်အတူဆန်းသစ်တဲ့ပလက်ဖောင်းအတွက်ကုန်သွယ်အတွက်ရွေးချယ်စရာအွန်လိုင်း။ ကုန်သွယ်ရေးကိုသာကွန်ပျူတာကနေပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့အမှတ်ကနေတဆင့်စမတ်ဖုန်းအပေါ်ပလီကေးရှင်းနှင့်ပတ်သက်။ သင်စတင်ခင်မှာ ဥပေဒ၊သင်နဲ့သိကျွမ်းဖြစ်လာလုပ်ငန်းအင်္ဂါနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များ၏အကူအညီဖြင့်များအခမဲ့အစမ်းအကောင့်ကို။ ကုန်သွယ်အပေါ်တစ်ဦးအစမ်း-စာရင္းမပါဘူးကွာတကယ်ပိုက်ဆံကိုးကားနှင့်အဆောင်အဖြစ်အမျိုးမျိုးကိရိယာများအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအတူတူပါပဲ။ တစ်ခုတည်းသောကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်အများအဆုတ်ခွာဖို့အမြတ်အစွန်းကနေသင့်ရဲ့အကောင့်ကို။ ရအကောင့်ကို၊သင်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါသာ၊မပါဘဲရှည်နဲ့ပျင်းစရာမှတ်တမ်းများ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖွင့်ဖို့အမှန်တကယ်အကောင့်ကို၊အနှိပ်ပြီးနောက်ခလုတ်ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွက်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်။ အဆာများသာစုံတွဲတစ်တွဲအတန်း၊သင်သွားဖို့ရွေးချယ်စရာ။ ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ကိုထောက်ပံ့ပေး ၁၈၀ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို။ ထို့အပြင်၊ရှိပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ။ ကုန်သွယ်အပေါ်ပြုသောအမှုရွေးချယ်စရာနှင့်အတူကုန္ဆံုးကနေမိနစ်ငါးမိနစ်။ နိမ့်ဆုံးအရောင်းအဝယ်အရွယ်အစားကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အဖို့အကဲဖြတ်၏အကျိုးကျေးဇူးများရေးဒင်းကုမ္ပဏီအတွက်၊ဒါပေမယ့်လည်းအလုပ်ဖို့အစေခံရန်။ သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုစတင်ရန်ပိုက်ဆံဖို့သေချာစေရန်အားလုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများအနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမရှိဘဲ ကြီးတောင်း၏။ သင်ထို့နောက်အတိုင်းလိုက်နာနှင့်အပေါ်ကြီးမားသောအခုပိုက်ဆံ၏။ ကနူး၊သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဆိုပါဖော်ပြချက်များကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများပေါင်းစပ်ကြောင်း၊သင်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဟာဗျူဟာနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးအရည်ကိုင်ရည်။လျှင်အကုန်မလုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံများ၊သူ၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်ပြမှုများမှကုမ္ပဏီများအတွက်ကုန်သွယ်၊အရာများကိုအချိန်အဘို့အဖွင့်ပွဲများအရောင်းအဝယ်။အပြင်မဟာဗျူဟာနှင့်အချက်ပြမှုများကိုလည်းရရှိနိုင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၏ကုန်ကူးလူသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ။ မှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်ကုန်သည်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထည့်သွင်းသော၊သင်မြင်ရလိမ့်မည်အဖွင့်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ကူးသူတို့ကိုသင့်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာ။ ကုန်သည်ရှိသည်သောသူတစ်ဦးအလိုဆန္ဒအဆက်မပြတ်ထိတွေ့နှင့်အတူ၊သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အစီအစဉ်များအတွက်။ ဤလျှောက်လွှာကိုရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူအဖြစ်အတွက် နဲ့ကစား။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုသာပေးခမဲ့သင္ၾပစ္စည်း၊ဒါပေမယ့်လည်းည့္အီးသီးအသီးအဘို့လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါလေ့လာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မည်သည့်သစ် ၊ပင်အတွေ့အကြုံ သားနိုင်မှဝင်ငွေအပေါ်ကုန်သွယ်မှုအတွက်ရှိခြင်းပြီးနောက်လက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ ကျော်ကြားမှုကိုရဖို့ရန်ဆက်လက်အကြားကုန်သည်အပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အဆင်ပြေပလက်ဖောင်းကိုထောက်ပံ့ရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်စေမည်သည့်လူ၊သက်ဆိုင်သူ၏အတွေ့အကြုံ။ အန္တရာယ်သတိပေးကုန်သွယ်သယ်ဆောင်မြင့်တဲ့ဒီဂရီများ၏အန္တရာယ်။ ဖြစ်နိုင်ကြောင့်ဆုံးရှုံးဖို့တစ်ခုလုံးကိုမြို့တော်။ အထူးစီးပွားရေးဧရိယာများမှာဒွိရွေးချယ်စရာသာပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ အမသတက္ေထားခဲ့ပါ။ သတင်းအချက်အလက်အပေါ်ဤသည်ဆိုက်ကိုအဘို့မရည်ရွယ်ဖြန့်ဖြူးရန်၊သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မည်သည့်နိုင်ငံသို့မဟုတ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နေရာထိုကဲ့သို့သောဖြန့်ဖြူးမည်ဖြစ်ကြောင်းဆန့်ကျင်ဖို့ဒေသခံဥပဒေသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းနှင့်အမမှာဒါရိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်များနေထိုင်ခဲ့:သြစတြေးလျ·ဘယ္လ္ဂ်ီ·ကေနဒါ·ျပင္သစ္·ဣ··လတ္ဗီး·နယူးဇီလန္·ကီ·အက်စ်·.
မိသားစုတစ်ခု၌ရပ်တည်တစ်ဦးအလွန်ခက်ခဲပြီးလွယ်အခြေအနေ၊ကလေးသူငယ်အခလိုလျှင်အ အိမ်အပြင်ဘက်တွင်။ မိဘများအဖြစ်လိုအပ်ချက်အတွက်အကူအညီနဲ့အကြံဉာဏ်မှာထိုကဲ့သို့သောအ ၊နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ။ ုိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေအကြံဥာဏ်နှင့်ထောက်ခံမှုအနှံ့တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်၊ဒါကြောင့်နှင့်အတူအမှုဖြစ် စွန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းအတွက်သင်၏အဓမ္မအမ့္ဆံုးအဆင့္ကေ။ ကျနော်တို့ရှိသည်အလွန်ကြီးစွာသောကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ နိုင်ထို့ကြောင့်သင်ပေးနှင့်အတူအခမဲ့ဥပဒေရေးရာအကူအညီ၊မသက်ဆိုင်သည့်အမှုအမျိုးအစားအတွင်း ကလေးများ၏။ တစ်ဦးစတင်အဖြစ်အမှတ်ကြသည်၊နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျကိုကူညီအတူအတွက်အရေးပါ၏လယ်ပြင် အလုံးစုံဒိန္း။ ကျနော်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ် အနေဖြင့်အခြေစိုက်စခန်းအတွက် လန်၊ဒါပေမယ့်ရနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ကျွန်း၏၊၊၊ဒိန္း၊ နှင့် ။
နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားနှင့်နေ့ရက်သာအရုရှ-ဘီလာရုနယ်စပ်မှတစ်ဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့်ဂိတ်၊သောအားဖွင့်လှစ် အတြက္ ၁။ ငါအရက်ချိန်း။၂။ ငါတင်ပြသောစာရွက်စာတမ်းများ၏ကိုယ်စားအခြားသူ၊သူရောက်မှရုရှားနိုင်ငံ။၃။ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားတဲ့ဗီဇာများအတွက်လူတစ်စု။ ပၚသို့အွန်လိုင်းချိန်းစနစ်နှင့်အဘယ်သို့သတင်းအချက်အျဖစ္သည္။၄။ သင်ရှိသည်ဖို့ချိန်းအကူးလက်မှတ်။၅။ ငါစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြလျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက်နှစ်ဦးဇာတချိန်တည်းမှာပင်။၆။ အဘယ်မှာရှိငါသည်ငါ၏အပေါ်သတင်းအချက်အမျိုးအစားများ၏ဗီဇာလိုအပ်။၇။ အဘယျသို့အမျိုးအစားများ၏ကျန်းမာရေးအာမခံလိုအပ်သလား။၈။ အခါအလိုအပ်တင်သွင်းတစ်ဦးပါဝင်လက်မှတ်သတင်းအချက်ကလူတစ်ဦးသည်မပိုးကူးစက်ခံရ။၉။ အဘယ်အခြေအသင့်မူရင်းစာရွက်စာတမ်းများပေးအပ်သည်။၁၀။ နိုင်ငံသားများသောနိုင်ငံတစ်ခုလိုအပ်ဇာကိုရုရွား။၁၁။ ဘူးသည့်ပြည်တွင်အဘယ်အခြေပြုရ။၁၂။ အဘယ်အရာကိုစာရွက်စာတမ်းများဖြစ်ရမည်နိုင်ငံသားများသြစတြေးလျ၊ယူအက်စ်အေ၊ဗြိတိန်၊အိုင်ယာလန်နှင့်ကနေဒါ။၁၃။ မည်မျှရက်ခရီးသွားမှာထုတ်ကုန် င့္သာ။၁၄။ ငါအပြောင်းရမယ်လေယာဉ်အတွက်ရုရှားလေဆိပ်။ ငါလိုအကူးအဇာ။၁၅။ ငါဖြစ်လိမ့်မည်ခရီးသွားလာရန်ရုရှားအတွက်ကား၊အဘယ်သို့သောအပိုဆောင်းအေထာက္အထားမ်ားလိုအပ္ပါသည္။၁၆။ ငါသည်ငါအလုအယက်ဇာ။ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအကိုစမ်းသပ်အချိန်။၁၇။ မည်သို့တစ်ခုမှာမှတ်ပုံတင်သူအတွက်နေထိုင်ကြသည်။
æ ပေးဆောင်ခဲ့သည့်အပေါ်အလုပ်လုပ်နေ့အလုပ္။ အဆိုပါပေးချေမှုအ æ ဖြစ်ပျက်လတစ်လပြီးနောက်၊သင်သည်သင်၏လစာအစီရင်ခံတင်ပြအခွန်အုပ်ချုပ်ရေးသည်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအစီအစဉ်၊သင်အလိုအလျောက်ထံမှစာတစ်စောင်ရအပေးချေမှုဒိန္းမီ ၁။ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၇။ အခါသင်ဖုံးလွှမ်းခြင်းအားဖြင့်အစီအစဉ်၊သင်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ရအခွန်အခမဲ့ငွေကြေးပမာဏအတွက် æ အလုပ်အတွက်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်အကိုင်အတွက်ကာလ ၁။ ဧ ၂၀၁၇ မှ ၃၁။ မတ်လ ၂၀၁၉။ æတွက်ချက်လိမ့်မည်ပေါ်အခြေခံ။၏ခလစာသို့မဟုတ်အမြတ်ထဲကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်အကိုင်။ ဆုချီးမြှင့်ဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်ညီမျှဖို့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း။ သင်သည်သင်၏လစာသို့မဟုတ်ကိဳ-အခွန်အမြတ်အစွန်းလျှင်။ အလုပ္။ သို့သော်၊သငျသညျထက်မပိုပေးဆောင်ရ ၂။ ငါးရာ ။ ။ အလုပ္။ သင်ရရှိနိုငျ æ အထိရှစ်လအတွင်း၌ကာလ ၁။ ဧ ၂၀၁၇ မှ ၃၁။ မတ်လ ၂၀၁၉။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်တက်မှရနိုင် ၄၅။ ၀၀၀ ။ ပေးဆောင်။ æ အခွန်အခမဲ့နှင့်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှုအခြားအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု။ သင်ရနိုင် æ လျှင်၊သင်ဖုံးလွှမ်းခြင်းအားဖြင့်အ æ။ သင်ရှိသည်အလျောက်ထံမှစာတစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိအပေးချေမှုဒိန္းမီ ၁။ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၇ လျှင်၊သင်ဖုံးလွှမ်းခြင်းအားဖြင့်အစီအစဉ်။ သင်ဖုံးလွှမ်းခြင်းအားဖြင့်အစီအစဉ်ဖြစ်ရပြီဆိုရင်ပျင်းအတွက်တစ်ပတ်လျှင် ၄၈၊၂၀၁၆၊နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာလက်ခံရရှိတဲ့အရည်အချင်းအကျိုး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်ခံရကြပြီအရည်အချင်းအကျိုးအတွက်အနည်းဆုံးလေးဆယ်ခုနစ်ပတ်ကြာကာလအတွက်ပတ် ၅၀၊၂၀၁၅၊အပါအဝင်တစ်ပတ်လျှင် ၄၈၊၂၀၁၆။ သို့မဟုတ်လျှင်တစ်ပတ်တာအတွက် ၄၈၊၂၀၁၆၊ခဲ့သည်မှာအနည်းဆုံး ၇၁ ပတ်ကာလအတွက်မှအပတ်က ၂၄၊၂၀၁၅၊အပါအဝင်တစ်ပတ်လျှင် ၄၈၊၂၀၁၆၊နှင့်အတူ:အကယ်။၊ကာလအတွင်း ၁။ ဧ ၂၀၁၇ ကို ၃၁။ မတ်လ ၂၀၁၉ တစ်ပါးကိုငြိမ်းအသက်အရွယ်သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းရန်သန်စွမ်းမှုပင်စင်၊အစောပိုင်းအငြိမ်းစား၊ သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင်စင်၊လောကဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခံရဖို့အစီအစဉ်။ ယုံကြည်လျှင်သင်ရှိသည်ဖို့အခွင့်အရေးဖြင့်ဖုံးလွှမ်း æ၊ဒါပေမယ့်မထံမှစာတစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိအပေးချေမှုဒိန္း၊သင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်အတွက်ထည့်သွင်းခံရဖို့အစီအစဉ်။ ရှာဖွေနေကြသောအခါသေချာပါစေ၊ချိတ်လက်စွဲသင်ခံရကြပြီ။ သင်တို့သည်လည်းလျှောက်ထားဘို့အဝန်ခံချက်အားဖြင့်ဆာအသင္းကပိုနှင့်အတူလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်မေးလ်သို့မဟုတ်သာမန်တိုက်ငွေပေးချေမှုဒိန္း။ æ မည်၏အခြေခံပေါ်မှာတွက်ချက်၏လုပ်ခလစာသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်အကိုင်ရှေ့တော်၌အခွန်။ ဆုချီးမြှင့်ဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်ညီမျှဖို့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း။ သင်၏လုပ်ခလစာသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းလျှင်။ အလုပ္။ သို့သော်၊သငျသညျထက်မပိုပေးဆောင်ရ ၂။ ငါးရာ ။ ။ အလုပ္။ ဆိုလိုကြောင်းသင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဘာမှလုပ်ပရီမီယံပေးဆောင်။ ပေးချေမှုဒိန္းတွက်ချက်၏æ၏အခြေခံပေါ်မှာသင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှ အခွန်အုပ်ချုပ်ရေးသည်။ သင်ရရှိတဲ့အစာ၊အသီးအသီးအချိန်အပေးချေမှုဒိန္းကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အစီရင်ခံခဲ့သည်လုပ်ခလစာမှအခွန်အုပ်ချုပ်ရေးသည်။ ရှိသည်ဆိုလျှင်အမြတ်အစွန်းကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်အကိုင်အတွက်ဒိန္းသို့မဟုတ်ပြည်ပ(ေဆး-ယ္ငယ္န္-နိုင်ငံ၊ဆွစ်ဇာလန်)၊သို့မဟုတ်ရှိပါကတစ်ဦးလစာများအတွက်အလုပ်ပြည်ပမှာ(စာမ်က္ႏွာ-ယ္ငယ္န္-နိုင်ငံ၊ဆွစ်ဇာလန်)၊သင်သည်ပင်ရှာရ æ။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်၊သင်ပေးဆောင်ရနိုင် æ၊သြဂုတ်လရဲ့အဆုံးမှာ ၂၀၁၇။ æ တွက်ချက်လိမ့်မည်များအတွက်လစာ၊အရာအစီရင်ခံတင်ပြအခွန်အုပ်ချုပ်ရေးဧပြီလထဲမှာ ၂၀၁၇ နှင့်ဇူလိုင်လ ၂၀၁၇။ ဒီ æ ပေးဆောင်လျှင်။ အလုပ္။ ပရီမီယံပေးဆောင်ခြင်းအတွက်၊တစ်လပြီးနောက်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အစီရင်ခံခဲ့သည်သင့်ရဲ့လစာ။ နမူနာ:သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အစီရင်ခံခဲ့သည်လုပ်ခလစာမှအခွန်အုပ်ချုပ်ရေး၊အောက်တိုဘာလအတွင်းရ æ ပေးဆောင်ခဲ့သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့က။ ဒါဟာအစလျှင်သည်ဟုဆိုလိုသည်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အစီရင်ခံစာသင့်ရဲ့င့္အတိုဘာလတလအတွက်နိုဝင်ဘာလအတွက်၊သင်သာရလိမ့်မည်ပရီမီယံပေးဆောင်ဇင်ဘာလ၌။ အခါသင်ပေးဆောင်ရ æ၊သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် အပေးချေမှုဒိန္း၊ဘယ်မှာသင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်သင်ပေးဆောင်ရပြီး၊ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ပရီမီယံတွက်ချက်သည်။ နိုင်ရန်အတွက်ပေးဆောင်ရ æ သင်ရှိရမယ်အများအတွက်ပေးဆောင်အလုပ်သို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်အကိုင်။ ရ ø ဖြည့်စွက်အဖြစ်သင်သည်သင်၏လစာ၊သင်ရနိုင် æ၏လစာ၊ဒါပေမယ့်မအား ø။ သင်အလှမယ်များအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်အကိုင်သောကြောင့်၊အတည်နှင့်သိသိသာသာလျှော့ချရေး၏စွမ်းရည်၊သင်ရနိုင် æ အမြတ်အစွန်း၏၊ဒါပေမယ့်မအသနားတော်မူ။ သင်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ရ æ များအတွက်ပေးဆောင်အလုပ်အတွက်အခြားအီး-ယ္ငယ္န္-နိုင်ငံတို့တည်ရှိမယ်ဆိုရင်၊သင်ပေးဆောင်အပေါ်အခွန်၏င့္အသာဒိန္း။ မရပါဘူးအလျောက်ထွက်ပေးဆောင် æ အခါ၊သင်သည်အလုပ်ပြည်ပမှာ၊ဒါကြောင့်သင်ပင်ရှာဘို့ပရီမီယံမှာငွေပေးချေမှုနှင့်ဒိန်းမတ်။ သင်တို့အဘို့အရှာကြသည်ကြောင်း æ ဖြည့်ခြင်းဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လိုပါကလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ။ သင်သည်လည်းရှာဖြည့်စွက်အားဖြင့်အောက်တွင်ပုံစံနဲ့ပေးပို့နှင့်အတူလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်မေးလ်သို့မဟုတ်သာမန်တိုက် အငွေပေးချေမှုဒိန္း။ အခါသင့်အဘို့အရှာဖွေနေကြောင်းæ. အလုပ်အတွက်ပြည်ပ၊တွက်ချက်၊အဆိုပါပေးချေမှုဒိန္းသင့်ရဲ့ æ၏အခြေခံပေါ်မှာအတွဲလက်စွဲ။ ရ æ ချက်ချင်းပေးဆောင်ပြီးနောက်ငွေပေးချေမှုရမည့်ဒိန္းလုပ်ငန်းများရှိသည်။ သင်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ရ æ အတွက်ကနေအမြတ်အစွန်း၏လုပ်ငန်းကိုလွတ်လပ်သောစီးပွားအတွက်ဒိန္းသို့မဟုတ်အခြားအီး-ယ္ငယ္န္-နိုင်ငံနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံလျှင်၊သင်ပေးဆောင်သောအခွန်အပေါ်သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းအတွက်ဒိန်းမတ်။ မရပါဘူးအလျောက်ထွက်ပေးဆောင် æ ပြီဆိုပါက၊သငျသညျအမြတ်အစွန်းကနေစစ်ဆင်ရေး၏အလုပ်သမားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ဒါကြောင့်သင်ပင်ရှာဘို့ပရီမီယံမှာငွေပေးချေမှုနှင့်ဒိန်းမတ်။ အခါသင့်အဘို့အရှာဖွေနေကြောင်း æ အမြတ်အစွန်းကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်အကိုင်၊ငွေပေးချေမှုဒိန္းနောက်ပိုင်းတွင်တွက်ချက်သင့်ရဲ့ပရီမီယံ၏အခြေခံပေါ်မှာသင့်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အခွန်ပြန်လာ။ အခါသင့်အဘို့အရှာဖွေနေကြောင်း æ အမြတ်အစွန်းကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်အကိုင်၊အလုပ္နဲရမယ်စာရွက်စာတမ်းများပူးတွဲသင်သည်သင်၏အမြတ်အစွန်း၊တစျခုအကောင့်အသစ်များအဖြစ်တစ်ဦးထံမှလက်မှတ်အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏သင့်အခွန်ပေးရန်တာဝန်။ ပေးချေမှုဒိန္းတွက်ချက်ပြီးတော့သင့်ရဲ့ æ ပေါ် ၏အခြေခံအတွဲကိုမှတ်တမ်းတင်။ ရ æ ချက်ချင်းပေးဆောင်ပြီးနောက်ငွေပေးချေမှုရမည့်ဒိန္းလုပ်ငန်းများရှိသည်။ သင်တို့အဘို့အရှာကြသည်ကြောင်း æ ဖြည့်ခြင်းဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လိုပါကလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ။ သင်သည်လည်းရှာဖြည့်စွက်အားဖြင့်အောက်တွင်ပုံစံနဲ့ပေးပို့နှင့်အတူလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်မေးလ်သို့မဟုတ်သာမန်တိုက်ငွေပေးချေမှုဒိန္း။ တစ်စုံတစ်ဦးလျှင်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုကူညီရန်သင်အဆက်အသွယ်ရငွေပေးချေမှုနှင့်အတူဒိန္း၊သင်ပထမဦးဆုံးပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ။ ဒါကြောင့်လည်းသက်ဆိုင်သော်လည်းသင်အတူတကွနေထိုင်၊နဲ့အခြားလိုအပ်နှင့်အတူစကားပြောတစ်ဦးပေးချေမှုဒိန္းကိစ္စရပ်အပေါ်။ သင်ရပါလျှင်ကူညီတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အဆက်အသွယ်ငွေပေးချေမှုဒိန္း၊သင်ပထမဦးဆုံးရှိ၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ။ ဒါကြောင့်လည်းသက်ဆိုင်သော်လည်းသင်အတူတကွနေထိုင်၊သင်ရုံရန်လိုအပ်နှင့်အတူစကားပြောတစ်ဦးပေးချေမှုဒိန္းကိစ္စရပ်အပေါ်။ အခါသင်လျှောက်လွှာတင်သွင်း၊ေဖာက္သည္ျဖစ္ရပါလုပ်ငန်းများအားဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုဒိန္း။ ေလွ်ာက္ထားရ æ သည်လေးပတ်မှအဆိုပါနေ့အငွေပေးချေမှုဒိန္းသင်၏လျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ပေးချေမှုပီးအသုံးပတ်၏ပျမ်းမျှအလုပ်ငန်းစဉ်၏။ သင်ကူညီနိုငျသောသေချာစေရန်အသင့်လျှောက်လွှာမည်ဖြစ်လုပ်ငန်းများအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ချိတ်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်သေချာအောင်သင့်ရဲ့အချက်အလက်အတွက်မှတ်ပုံတင်။ အ အကန့်သတ်၊ငွေပေးချေမှုဒိန္းပေးခဲ့ပြီအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအယူရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်။ နှင့်ပျမ်းမျှအပြောင်းအလဲအချိန်ပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်အချိန်ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ယူမှလုပ်ငန်းစဉ် ၈၀ မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း။ အပလီကေးရှင်း၊ငွေပေးချေမှုဒိန္း။ ပေးချေမှုဒိန္းကဲ့သို့အမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်။ လျှင်သင်ရေးထားပြီမှဆုတ်ခွာဒိန္း၊သင်အတွက်မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်ဖြေနှစ်ဆယ်အတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ရက်ပတ်လုံး။ သင်မကျေနပ်လျှင်၊သင်ဆက်သွယ်ပါရန်အပေးချေမှုဒိန္း။ သင်သဘောသင်တစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ၊သင်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ကိုအကြောင်းတိုင်ကြား။ ပေးချေမှုများအတွက်ဒိန္းရှိသည်ဖို့သင်၏တိုင်ကြားတွင်းလေးပတ်ကြာပြီးနောက်သင်ခံရကြပြီ။.
ဟန်ဂေရီနဲ့ပိုလန်၊သင်ရနိုင်အၿပံဳးသင်အမြဲအိပ်မက်မက်နေစဉ်၊ချွေတာတက်မှခုနစ်ဆယ်မှနှိုင်းယှဉ်ပါကအဆိုပါေစ်းဒိန္း။ သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အတွက်လေ့လာမှုတစ်ခုဒိန္းသငျသညျထားခဲ့ပါခြင်းမပြုမီ၊ကျနော်တို့အတွက်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများ၏ဟန်ဂေရီနဲ့ပိုလန်အတွက်သွားဆရာဝန် ø။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်အသွားဆရာဝန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဂၤလိပ္စကားေျပာသွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်၊တစ်ဦးဖြည့်စွက်ကုသမှုအစီအစဉ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကုသမှု၏။ ကျွန်တော်အနေနဲ့လွတ်လပ်သော၊နှင့်သာပူးပေါင်းနှင့်အတူဆေးခန်းတွေ့ဆုံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောစံ၊နှင့်ကျနော်တို့မှာအတည်ပြု။ အားလုံးသည်ကုသမှုနှင့်အတူသွားဆရာဝန်ရဲ့အာမခံချက်။ ကျနော်တို့ကူညီသင်စတင်ထံမှပြီးမှ၊ဒါကြောင့်သင်ရနိုင်သွားဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုလိုအပ်သည်၊လက်ျာစျေးနှုန်းမှာ။
အားဖြင့်ရှာမည် ၊ရှေ့နေမှာ ၊ဒိန္း။ မီရောင်းချကားေစာချုပ်၏ရာင္းရန္ရွိသည္။ ကိုတစ်ဦးရောင်းချသူအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ကား၊သင်လုံခြုံကောင်းတစ်ခုစာချုပ်ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်တိုင်ကြား။ အကောင်းတစ်ဦးသဘောတူညီနိုင်ဘူးအကောင့်သို့ယူအားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေပြဿနာတွေသို့မဟုတ်တတ်နိုင်သမျှတိုင်ကြားကြောင်းပေါ်ထွန်းစေခြင်းငှါ၊ဒါပေမယ့်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပြီးတုံ့ပြန်ဖို့အများအပြား။ သင်လုပ်နိုင်နှင့်အတူအားသာချက်လည်းထိုဆောင်းပါးဖတ်"မီသင်အသုံးပြုတဲ့ကားကိုဝယ်ခြင်း"၊အဖြစ်ဆောင်းပါးပေးပြီးနှင့်အတူကိစ္စရပ်များကိုအဖြစ်၊ သင်တိုင်း၊ရောင်းသူလည်းသတိထားရမည်။ သင့်ရဲ့တာဝန်အဖြစ်တစ်ဦးရောင်းသူ-ချို့တဲ့၊စသည်တို့ကို။ ကိုတစ်ဦးရောင်းချသူအဖြစ်အသုံးပြုသင့်ပြီတဲ့တာဝန်အကြောင်းကြားဖို့ဝယ်သူကအားလုံးအမှားနှင့်အားနည်းချက်များကိုသိ။ သင်ကလုပ်နေကြ၊သင်ပြေးဖို့အန္တရာယ်များအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်လိမ့်မည်၊မည်သည့်ချို့ယွင်းဖြစ်စေလူသိများသို့မဟုတ််ာ-။ သတင်းအရာများကို၊အစဉ်အမြဲကျမ်းစာ၌ရေးထားသို့ဝယ်ယူစာချုပ်။ သင်ရမယ်မထုတ်ဖော်ရန်အကြောင်းကားအထက်သင်သက်သေပြနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်အတော်လေးသေချာ။ ဤသက်ဆိုင်ခြင်း။ သူ။ဘယ်လောက်ကားခဲ့မောင်းနှင်၊ေရွးအခါကားမှတ်ပုံတင်ဖြစ်ပါတယ်၊ပစ္စည်း၊စသည်တို့ကို။ထို့ကြောင့်အရေး။ သူ။ မဘာမဆိုေၾကာ္ျငာမ်ား၊အခါသင်သွင်းထားကားေမာ္ဒယ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ဒါဟာသတင်းအချက်အလက်ဝယ်ထားအလေးချိန်အပေါ်၊သူတို့အထဲတွင်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်အ ø နှောင်းပိုင်း-ဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ø ရန္ပံုေ။ ဒါဟာသင်တန်း၏ရှိမရှိသင်မှတက်ချင်ပေးဝယ်အကြွေး၊ဒါကြောင့်သူသို့မဟုတ်သူမပါဘူးပေးချေဝယ်ယူစျေးနှုန်းလုံးလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်ချိတ်ဆက်ရယူခြင်း။ ဒါကြောင့်မဖြစ်စေခြင်းငှါ၊သို့သော်၊ကြောင်းအကြံပြုအဖြစ်၊ပုဂ္ဂလိကရောင်းသူကိုထောက်ပံ့ပေးအကြွေး။ ဒါဟာသင့်စေ လက်လီဘဏ်များနှင့်။ ရထို့ကြောင့်ဝယ်ယူစျေးနှုန်းရီအချိန်ကားမကယ်မလွှတ်မှဝယ်။ ဝယ်ပေးသောရန်ပုံငွေနှင့်အတူစစ်ဆေး၊ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်အဖြစ်စာရင်းသွင်းသို့မဟုတ်ကထုတ်ပေးတဲ့ဘဏ်၊မဟုတ်ရင်သင်အန္တရာယ်အကြောင်းအစစ်ဆေးသည်ရဟန္တာ။ သို့မဟုတ်ကြိုတင်၏ခေါင်းစဉ်အတွက်ကား။ ဒါဟာသင်အဘယ်သူသည်ရောင်းသူဝယ်သူမှတာဝန်ရှိသည်၊မရှိသည်ကိုတစ်ပေါင်နှံသို့မဟုတ်အလားတူအတွက်ကား။ ယူပေါင်နှံသို့မဟုတ်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းများအတွက်ခေါင်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်ကိုသင်ဝယ်ယူ၊သင်သေချာပါစေရမယ်ရအပေါင်ခံသို့မဟုတ်အထိန်း၏ခေါင်းစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခံရကြလိမ့်မည်မီကားလွှဲပြောင်းပေးဝယ်ရန်။ အဟောင်းပိုင်ရှင်များကားပြောသည်မရှိ ၌ကား၊သင်ဆဲအဝယ်များ၏တာဝန်သာ။ သင့်ထို့ကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရှိမရှိရှိသင့်တစ်ပေါင်နှံသို့မဟုတ်အလားတူသင့်ကားအတွက်မီရောင်းချ။ ဤသင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်သို့သွား။ ခွငဋဿဌာန်ကျသော။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအနှုန်းကဲ့သို့"ဖြစ်ရောင်းသည်"၊"ဝယ်ယူ"ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်သို့မဟုတ်"မရှိဘဲတာဝန်အတွက်အမှားအယွင်းများနှင့်ချို့တဲ့"အဖြစ်မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ရောင်းသူအတွက်ဝယ်ယူရန်သဘောတူ။ ထိုကဲ့သို့သော အထွေထွေဝေါဟာရများကိုရှောင်ရှားသင့်။ သူတို့မကြာခဏထိရောက်မှုနှင့်မဟိုဠ်အများကြီးအလေးချိန်အားဖြင့်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အ ø။ သင်ရမည့်အစားယူကွန်ကရစ်ဘာသာရပ်အားလုံးအယွင်းကြောင်းသင်သိအရေးသို့သူတို့ကိုသဘောတူ။ အာမခံ။ အဖြစ်မှန်အဝယ်မှုရှိပါတယ်အာမခံပြီးနောက်ရောင်းချတဲ့ကုန်ပစ္စည်း၏လုပ်ဆောင်။ ဈေးဝယ်ခဲ့သည်အဘယ်သူမျှမအာမခံအရဒိန်းမတ်၊ဥပဒေနှင့်ဒိန်းဥပေဒမျှမစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပေါ်အာမခံ။ သင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ရောင်းသူဖြစ်ပါသည်မဟုတ်တာဝန်ပေးဝယ်မဆိုမျိုးအာမခံချက်။ အာမခံရမည်ဖြစ်သီးခြားသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ သို့သော်၊သင်ကသတိပြုမိသူဖြစ်ရမည်သောအချက်အလက်တွေအတွက်သတ်မှတ်ခြင်း။ သူ။ ကြော်ငြာနိုင်မည်ဖြစ်၏ဂုဏ်သတ္တိများကား၊သင်လောက်ကိုဝယ်။ ဝယ်သူရဲ့စာမေးပွဲ၏။ မည်သည့်အမှားအယွင်းများနှင့်အားနည်းချက်များအဖြစ်အဝယ်နိုင်လိမ့်မည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်၊သို့မဟုတ်သင့်ရှာဖွေ၊တစ်စာမေးပွဲကိုကား၊သူနောက်ပိုင်းတွင်ဆိုကြသည်။ ဒါဟာသင့်ထို့ကြောင့်ရောင်ပြန်ဟပ်အတွက်စာချုပ်များရောင်းချရှိမရှိဝယ်ထားခွင့်ကိုဆန်းစစ်ကားနှင့်။ သူ။ စမ်းသပ်မောင်းနှင်တဲ့ကားကိုကြိုတင်ဝယ်ယူရန်။ ဒါဟာနှင့်အတူအားသာချက်ဖြစ်ညွှန်ပြသည့်အခါနှင့်ဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ။ အဆိုပါပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ပြီးအာမခံ။ ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်မည်သည့်အလျဉ်းသင့်ရှင်းလင်းတွက်အရောင်းစာချုပ်များ၊အဘယ်သူချေမည်နှင့်စီစဉ်များအတွက်ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ကားတစ်စီး၏။ ဖိဳခဲြျခင္း။ သင့်အတွက်စာချုပ်များရောင်းချပေးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံအခါကားနောက်ပိုင်းတွင်၊အမြင်နှင့်ဝယ်ရရှိ အဖြစ်နာက်မှသဘောတူ။ æ ဆောင်းပါးကမရည်ရွယ်အဖြစ်တစ်ဦးအစုံပြန်လည်သုံးသပ်၏အရောင်းစာချုပ်များ၊သငျသညျအဘယျသို့၊အဖြစ်ရန္စီစဉ်ရပါမည်များအတွက်အစားအသုံးပြု၊နှင့်သင်ရှိစေခြင်းငှါအခြားအခြေအနေထက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောသူတို့အား၊သင်တို့သည်သတိပြုသင့်၏။ ဒါဟာထို့ကြောင့်မအစားထိုးလိုဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်တစ်ခုအတွက်ကွန်ကရစ်။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစရှိကားတစ်စီးဈေးနှုန်းများခဲ့သောအရင်းအမြစ်များအတွက်အကဲဖြတ်ခြင်း၏။ အားလုံးအကဲဖြတ်မှုများအပေါ်အခြေခံ စျေးနှုန်း၊ လွတ်လပ်သောကိရိယာ ။.
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းကိုငှားတည်ဆောက်အပေါ်တက်ကြီးမားတဲ့ဒေတာဘေ့စ၏လန္ဒန္၌ဒိန္း။ ဖြည့်စွက်ကာ၊သငျသညျအစရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အကြံပေးချက်များရှာတွေ့ဖို့တိုက်ခန်းတစ်စျေးနှုန်းမှာလူအများစုတတ်နိုင်။ သင်သည်လည်းပေါ်အကြံဥာဏ်တွေရဘယျသို့အမှုအရာကိုသင်သတိပြုမိဖြစ်သင့်အတွက်ငှားရမ်းခြင်းများ၏အရွယ်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ရွေ့လျားရန္ၾ။ သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်ဘယ်သို့သောလန္ဒန္ရှိပါတယ်၊ကြီးမားတဲ့အရေအတွက်အမြို့မြို့၊ထို့နောက်ကိုနှိပ်ပါရွာေဖြေပးရန္အနူး။ ရှာဖွေဖို့ရရှိနိုင်အိမ္ျနိုင်ပါတယ်အဓိကလုပ်ငန်း။ အများအပြားအဓိကအမြို့မြို့၌ဒိန်းသည်များအတွက်လိုအပ်တိုက်ခန်းငှားရမ်းခအရာထက်ကြီးမြတ်သောထောက်ပံ့ရေးအဌားအိမ္ရာ။ ဒီဖန်တီးအတော်လေးသဘာဝကျကျအဖိစျေးကွက်အပေါ်အများအတွက်လစ်လပ်အိမ္ျသောစေသည်သောထင်ရနိုင်ပါမဖြစ်နိုင်သလောက်ရှာတွေ့ဖို့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့၊ဥပမာအားဖြင့်၊ကျောင်းသားများကို။
Limited şirket - dk ApS Oluşturun. kr fiyat online
© 2021 ရှေ့နေများအတွက်ဒိန်းမတ်။ အားလုံးရှေ့နေအြန္လိုင္း